ကျွန်တော် ဘယ်ရောက်နေတာလဲ….??? အမှောင်ထုက ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းထဲကို စိုးမိုးထားသည်။ လူတစ်ကိုယ်လုံး လေထဲမြောက်နေသလို ခံစားရပြီး သစ်ရွက်တစ်ရွက်ကဲ့သို့ ပေါ့ပါးနေသလို ခံစား ရသည်။ ကျွန်တော် အားယူပြီး မျက်လုံးဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဝေ့ကြည့်လိုက် သည်။ ဟင်….။ လူတွေ အများကြီး ပါလား…။ ဘာလို့ အိမ်ကို လူတွေ ဒီလောက်အများကြီး လာနေရ တာလဲ…။ ပြီးတော့ သူတို့အားလုံး မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်စတွေနဲ့ ၀မ်းနည်းတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေနဲ့…။
ကျွန်တော် ကြောက်လန့် တကြား အာခေါင်ခြစ်ပြီး အော်ဟစ် လိုက်သည်။
လူတွေ တစ်ယောက်မှ ကျွန်တော့်အော်သံကို မကြား..။ ကျွန်တော် အံ့သြစွာဖြင့် အမေ့ကို မျက်စိဝေ့ပြီး ပတ်ရှာလိုက်သည်။ တွေ့ပါပြီ…။ အို…။ အမေ…ငိုနေပါလား…။ ဘာလို့ ငိုနေရတာလဲ အမေရယ်…..။ ကျွန်တော် အမေ့အနားသို့ သွားရောက် နှစ်သိမ့်ပေးရန် အိပ်နေရာမှ အားယူ ထထိုင်လိုက်သည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ ကျွန်တော် ထထိုင်လိုက်စဉ် ကျွန်တော့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူ ပါမလာခဲ့..။ အိပ်နေလျက်အတိုင်း ပဲ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် အံ့သြလွန်းပြီး ပြန်အိပ်ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့.. ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အတူလိုက်ပါနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပြီး ပြန်ထထိုင်လိုက် သည်။ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာ အိပ်လျက်သား ရှိလျက်….။
ကျွန်တော် ကြောက်လန့်တကြား အော်ဟစ်မိလိုက်သည်….။ ငါဘာဖြစ်သွားတာလဲ..။ ငါဟာ အိပ်မက်တစ်ခု မက်နေတာလား.….??? ဒါမှမဟုတ်... ငါသေဆုံး သွားခဲ့ပြီလားး??? အတွေးပေါင်းစုံတို့ က ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲတိုးဝင်လာသည်။ ကျွန်တော် စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပြီး နောက်ဆုံး မှတ်မိသမျှသော ခေါင်းထဲက မှတ်ဥာဏ်တို့ကို ကြိုးစားပြီး ပြန်လည် တူးဖော်ဆွလိုက်သည်။ ငါ နောက်ဆုံး ဘာလုပ်နေတာလဲ…??? ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲ…? အလို…။ ငါ မှတ်မိပြီ…။ ငါ…ငါ….. ရေ နစ်…နေတာပဲ… ဟုတ်တယ်…. ငါ … အရက်သောက်ပြီး ရေကူးရင်း ရေ နစ်နေတာ…..။
ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ်က ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို သေချာအောင် ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။ ဖောင်းကားနေသော ဗိုက်…၊ ဖြူဖတ်နေသော ကျွန်တော့် အသားအရေ…။ ပွရောင်းနေသော ခြေထိပ် လက်ထိပ်…။ သေချာ ပါပြီ…။ ကျွန်တော် ရေနစ်ပြီး သေဆုံးခဲ့ပါပြီ..။ ဒါဆို…အခု…… ကျွန်တော်ဟာ… လွင့်မျော နေတဲ့ ၀ိဥာဉ် တစ်ကောင်ပေါ့…။
ကျွန်တော် အမေ့အနားကို သွားထိုင်လိုက်သည်။ အမေကတော့ အတော့်ကို ငိုထားရလို့ထင်သည်။ မျက်လုံးတွေမို့ပြီး..မျက်လုံးတွေ နီရဲနေသည်။ အမေငိုနေတာ ကြည့်တော့ ကျွန်တော်လည်း အတော် ၀မ်းနည်းပြီး အမေ့နားမှာ ထိုင်ငိုမိသည်။ ကျွန်တော့် အမေ့ကို ထိကိုင်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည်။ မီးခို့ငွေ့ကို ဖမ်းဆုပ်ရသလို လေကိုသာ ဖမ်းဆုပ်မိလိုက်သည်။ ကျွန်တော် "အမေ…" လို့ ခေါ်လိုက်သည်။ အမေ မကြား..။ ကျွန်တော့် ၀မ်းနည်းစိတ်တို့ အထွတ် အထိပ်ရောက်လာပြီး ကြောက်စိတ် အထီးကျန်စိတ်တွေ ၀င်ရောက်လာသည်။ အမေ ဒီလောက် အတန်တန် တားနေတဲ့ကြားကနေ မူးမူးနဲ့ အတင်း ရေကူးထွက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အခုတော့ … အခုတော့.. အမေ့စကား နားမထောင်ခဲ့လို့ … အမေနဲ့ ဘ၀ခြားနေတဲ့ သားအဖြစ်ကို အမေ မတွေ့နိုင်တော့ ပါဘူးလေ…။
ဒီနေ့…. အိမ်မှာ ရက်လည်မယ့်နေ့……။ ကျွန်တော် နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော် လူ့ဘ၀တုန်းက ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ယောက် မဟုတ်ပဲ မူးရူးနေပေမယ့် ဒီနေ့လို ရက်လည် နေ့မျိုးမှာ မိသားစုက ပေးဝေတဲ့ ကုသိုလ် အဘိုးဝါဂ ကို သာဓုခေါ်ရင် ကောင်းရာ ဘုံဘ၀ကို ရောက်ရှိမယ်လို့ တော့ နားစွန် နားဖျား ကြားဖူးထားသည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် နောက်ဘ၀ ကောင်းရာ မွန်ရာ ဘုံဘ၀ကို ရောက်နိုင်ရန် သာဓု ခေါ်ဖို့ ပြင်ထားလိုက်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့.. ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ လူ့ပြည်မှာ နေရမယ့် နောက်ဆုံးရက် ဖြစ်လာမှာ လေ..။
ဘုန်းကြီးတွေ ငါးပါးသီလပေး တရားဟောပြီး နောက်ဆုံး အမျှဝေတဲ့ အချိန်ရောက်လာပါပြီ…။ အမေက ရေစက်ခွက်လေးကိုင်ရင်း…
"သားလေးရေ…. ပြုခဲ့သမျှ ကောင်းမှုတွေ အတွက်… အမျှ…. အမျှ…. အမျှ… ယူလှည့်ပါကွယ်…."
ကျွန်တော် အားရ၀မ်းသာ သာဓုခေါ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည်။ သို့သော်… ပါးစပ်က ဘာသံမှ ထွက်မလာ……
"သားရေ… အမျှ….. အမျှ….အမျှ….."
ကျွန်တော် ထပ်ကြိုးစားသည်။ ဘာသံမှ ထွက်မလာ..။
ကျွန်တော် ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်မှာ သာဓုခေါ်ဖို့ နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး တစ်ခုသာ ရှိတော့သည်။
"အားလုံး ကြားကြားသမျှ…… အမျှ…. အမျှ….. အမျှ……ယူတော့ မူကြပါကုန်လော့…."
ကျွန်တော် ရှိသမျှအားနှင့် ပါးစပ်ထဲက သာဓု တစ်လုံးထွက်လာဖို့ အရေး ကြိုးစားသည်။ သို့သော်.. အချည်းနှီးပင်… ကျွန်တော့် အသံတို့ လည်ချောင်းဝမှာတင် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော် သိလိုက်ပါပြီ..။ ကျွန်တော် ပြုခဲ့သော အကုသိုလ်ကံတို့သည် ကျွန်တော့်ကို သာဓုခေါ်ဖို့ အခွင့်အရေး မပေးခဲ့..။ ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်တို့ စီးကျလာသည်။ နောင်တတရားတို့သည် ကျွန်တော့် ဆီကို အခါလွန်မှသာ ရောက်ရှိခဲ့လေပြီ..။
မီးသဂြိုလ်စက်ထဲမှာ တစ်ရွှေ့ရွှေ့ လောင်ကျွမ်းနေသော ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရင်း… သင်းချိုင်းမှ အိမ်သို့ အသီးသီး ပြန်ကုန်ကြပြီဖြစ်သော မိသားစု ၀င်များနဲ့ လူတွေကို ကြည့်ရင်း… ကျွန်တော် ၀မ်းနည်းလာသလို ခံစားရသည်။ ကျွန်တော် သူတို့နဲ့အတူ ပြန်လိုက်သွားဖို့ ကြိုးစားသည်။ သို့သော်… ကျွန်တော် လိုက်လို့ မရ… ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ် မီးသဂြိုလ်စက်ထဲမှာ လောင်ကျွမ်းသွားပြီးကတည်းက ကျွန်တော် လူသားတွေအနားကို ကပ်လို့မရတော့…။ လူတွေနား ကပ်လိုက်တာနဲ့ မီးနဲ့မြှိက်လိုက်သလို အတော့်ကို ပူလောင်လှသည်။ သြော်…. လူ့ဘ၀က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်တွေ မကုန်မရွှေ့… သာဓုဆိုတာ ပါးစပ်ကနေ မထွက်နိုင်ချင်း အချိန်ထိတော့… ဒီဘုံဘ၀မှာ ၀ဠ်ကြွေးတွေကို ကျေအောင် ပြန်လည် ပေးဆပ်ရတော့မှာပေါ့လေ… ဟု တွေး ရင်းနဲ့သာ………။
မှတ်ချက် ။ ။ ရ သ စာပေ တစ်ခုအနေနှင့်သာ ဖတ်ရှု့ပေးပါခင်ဗျာ..။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
တရံရောအခါတွင် နတ်ပြည် ၆ ထပ်တွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သော ဗြမ္မာမင်းကြီးသည် အကြံတစ်ခုရလေသည်။
နတ်ပြည် - ငရဲပြည် အမြန်လမ်းမကြီးကိုဖောက်လုပ်လိုသော အကြံဖြစ်လေသည်…။
အစည်းအဝေးပြီးသောအခါ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ နတ်မင်းကြီးနှင့် ငရဲမင်းကြီးတို့ နတ်ပြည်-ငရဲပြည် အမြန်လမ်းမကြီးကို
တဝက်စီ (၅၀%) ဖောက်လုပ်ရန် သဘောတူလိုက်လေသည်…။
“ဗြမ္မာမင်းကြီး ခင်ဗျား ခုဖောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့ နတ်ပြည်-ငရဲပြည် အမြန်လမ်းမကြီး ဟာ တစ်လမ်းလုံးသာပြီးသွားတယ်
ကျွန်တော်မျိုးတစ်ယောက်တည်းသာ ဖောက်ခဲ့ရကြောင်း အချောင်ခိုပြီး ဘာအလုပ်မှ မလုပ်တဲ့ နတ်မင်းကြီးကို မေးမြန်းအရေးယူပေးပါ”
“အရှင် … ဗြမ္မာမင်းကြီး ခင်ဗျား…. ကျွန်တော် ခုဆောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့ နတ်ပြည်-ငရဲပြည် အမြန်လမ်းမကြီး
စမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်တည်းက နတ်ပြည်မှာ အင်ဂျင်နီယာတွေကို စုစောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ နတ်ပြည်မှာ အင်ဂျင်နီယာ က လက်ဆယ်ချောင်းမပြည့်ပါဘူး….
ငရဲမင်းကြီး ဆီမှာတော့ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ မေဂျာအစုံ ကျောင်းအစုံက
အင်ဂျင်နီယာတွေ Ph.d, M.E, M.Arch B.E, B.Arch, B.Tech, AGTI စုံလင်စွာရှိပါတယ်…
ဒါကြောင့်မို့ ငရဲမင်းကြီး ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုဟာ အရမ်းမြန်ပြီးတော့ တစ်လမ်းလုံးကို သူတစ်ယောက်တည်း ဖောက်လုပ်ပြီးစီးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လူ့ပြည်ဆင်းပြီး နတ်ပြည် Promotion အတွက် အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားတွေကို
ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့.အရက်မသောက်ဖို့.ဖဲမရိုက်ဖို့… မကောင်းတာတွေ မလုပ်ဖို့…. တွေ ပြောဆို စည်းရုံးပြီးတော့
နတ်ပြည်မှာ အင်ဂျင်နီယာ အရေအတွက်တိုးအောင် ကြိုးစားပါ့မယ်…. ကျွန်တော့်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ”
ကဲ...ဒီတစ်ခါတော့ shewee လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီး မတ်တတ်ကြီး ဆီးသွားနိုင်တဲ့ အကူပစ္စည်း တစ်ခုအကြောင်း ဖောက်သည်ချ လိုပါ၏။
ဒီပစ္စည်းဟာ အမျိုးသမီးတွေ အပေါ့သွားလိုတဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ (ဟုတ်တာပေ့ါ :D )
များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေ အပေါ့သွားရင် ထိုင်ပြီး သွားတာများပါတယ်....
ဒီပစ္စည်းကတော့ မတ်တတ်ရပ်လျက် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။သယ်ရ ပြုရ လည်း လည်း လွယ်ကူပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် အများသုံးအိမ်သာ (ဥပမာ- ဈေးအိမ်သာ) တစ်ချို့တွေဟာ ၀င်လိုက်ရင် အလွန်ညစ်ပတ် နေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့တွေဆို အိမ်သာခွက်ထဲမှာ ရေတွေ ၊ မစင်တွေ ပြည့်ပြီး လျှံနေတတ်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကျရင် ထိုင်လျက်နဲ့ အပေါ့သွားဖို့ အင်မတန် ၀န်လေးဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီပစ္စည်းက မတ်တတ်ကြီး အပေါ့စွန့်ဖို့ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။
အပင်တွေကြားထဲမှာ တောထိုင်...အဲ....တောမတ်တတ် (only အပေါ့) သွားဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
အကောင်ပလောင်တွေ (ကျွတ်၊မြွေ၊စသည်....) ရန်ရှာခြင်းမှ နည်းနည်းကာကွယ်နိုင်တာပေါ့နော် :D
လျှပ်စစ်ဓာတ်စီးမှုပြုပြင်ရာမှ ဓာတ်လိုက်၍ အုတ်တံတိုင်းပေါ် ပြုတ် ကျသေဆုံး မှုဖြစ်ပွား
မန္တလေး ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်စီးမှုကြောင့် အုတ်တံတိုင်းပေါ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှ မေ ၂၅ ရက် ညနေ ၅ နာရီခွဲက မန္တလေး အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးတွင်ဓာတ်လိုက်သေဆုံးသူတစ်ဦး ရောက် ရှိနေကြောင်း သတင်းအရ အမှတ် (၃) နယ်မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ် ထိုက်လင်းစိုးနှင့် အဖွဲ့က သွားရောက်စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ----- (၂၆) နှစ်၊ လျှပ်စစ်ပြုပြင်လုပ်သား၊ မောရဂီဝါရပ်ကွက်နေသူဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ၂၆ လမ်း၊ ၇၂-၇၃ လမ်းကြားရှိ Vidit ရေချိုးခန်းသုံး ပစ္စည်းဆိုင်ရှိ ဆိုင်းဘုတ်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်စီးနေသဖြင့် ပြုပြင်ရန်အတွက် အမြင့် ခြောက်ပေခန့် အုတ်တံတိုင်းပေါ်သို့ တက်၍ပြုပြင်စဉ် ဓာတ်လိုက်ကာ ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ ပြုတ်ကျ သေဆုံးခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသဖြင့် အမှတ် (၃) နယ်မြေရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၂/၂၀၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်လာတစ်သိန်း ထောက်ပံ့မည့် Ideabox အစီအစဉ်ကို စတင်လျှောက်ထားနိုင်
ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတစ်ခုဖြစ်သည့် Ooredoo Myanmar သည် Ideabox အစီအစဉ်တစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပြီး ၎င်းအစီအစဉ်အရ ကဏ္ဍခြောက်ခုအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သူများကို ရွေးချယ်၍ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
ကျန်းမာရေးအခန်းကဏ္ဍ၊ ပညာရေးအခန်းကဏ္ဍ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအခန်းကဏ္ဍနှင့် ငွေကြေးပေးချေမှု (Payment Solution) အခန်းကဏ္ဍအပြင် အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်သည်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ရွေးချယ်ကာ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသွားရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
“ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုလည်း ပိုကောင်းအောင်၊ ပိုပြီးတိုးတက်အောင် လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ရှိရမယ်။ အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကို ကိုယ်နဲ့အပြိုင်ဖြစ်လာမယ့် ကုမ္ပဏီတွေ၊ နိုင်ငံတကာက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ရောက်မလာခင်မှာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ချင်သူတွေကို အဓိကရွေးချယ်သွားမှာပါ” ဟု Ideabox အစီအစဉ်၏ စီနီယာဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Julian Gorman ကပြောသည်။
ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို ideabox.com.mm ၌ ဖော်ပြထားပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်အရ ရွေးချယ်ခံရသူများကို ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်ဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့မှုများကို ယခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း စတင်ပေးအပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၌ စွန့်ဦးတီထွင်လိုစိတ်ရှိသော မျိုးဆက်သစ် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များ ပေါ်ထွက်လာစေရန် Ooredoo က အဓိကရည်ရွယ်ထားသည်ဟု သိရသည်။ ထို့အပြင် အင်ဂျင်နီယာ၊ ဒီဇိုင်နာနှင့် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ကိုင်လိုသူများသည်လည်း Ideabox အစီအစဉ်နှင့် ပူးပေါင်းလိုပါက ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း Ooredoo က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း eGovernment ဆက်ကြောင်းများအတွက် ဖိုက်ဘာကေဘယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ တင်ဒါခေါ်
နေပြည်တော်ရှိ အစိုးရဌာနများတွင် eGovernment ဆက်ကြောင်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်သည့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။
ဖိုက်ဘာကေဘယ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဖိုက်ဘာကေဘယ်လိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ Data Network နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ လုပ်ငန်းအပေါ်စိတ်ဝင်စားပါက စဘော်ငွေ ကျပ်ငါးသိန်းတိတိကို စိတ်ဝင်စားမှုအာမခံကြေးအဖြစ် ပေးသွင်းပြီးမှသာလျှင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ လုပ်ငန်းမရရှိပါက ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တင်ဒါခေါ်ယူသည့် ပစ္စည်းများကို လုပ်ငန်းအပ်နှံသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း အပြီးသတ်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပစ္စည်းပေးသွင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါက ရက်လွန်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် နှောင့်နှေးကြေးအဖြစ် တစ်ရက်လျှင် လုပ်ငန်းတစ်ပတ်လျှင် နောက်ကျပေးသွင်းမည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတစ်ရာခိုင်နှုန်း ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ရက်သတ္တပါတ်စုစုပေါင်း ခြောက်ပတ်အထိသာ ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကာလထက်ကျော်လွန်ပါက ပေးသွင်းထားသည့် အာမခံငွေအားလုံးကိုသိမ်းယူ၍ နာမည်ပျက်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်ပါက အာမခံများကို လုံးဝထုတ်ပေးခြင်းမပြုသည့် နာမည်စာရင်းကြေညာခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တင်ဒါနှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်လက်များကို ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း နေပြည်တော် ဒုတိယ အထွေထွေမန်နေဂျာရုံးတွင် စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
တင်ဒါပုံစံတစ်စောင်လျှင် တစ်ထောင်ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဇွန်လ ၂၄ ရက်တွင် တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ထက် ကျော်လွန်ပေးသွင်းသော တင်ဒါများအား လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
ကိုယ့်မှာဝင်ငွေ အသင့်အတင့်ရှိနေပင်မဲ့ ငွေမစုမိတဲ့လူမျိူးလည်းရှိသလို၊ ဝင်ငွေနည်းပင်မဲ့လည်း သေသေချာချာ စုဆောင်းတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါ။
၁. ငွေစုစာအုပ်ကို သူ့နေရာနဲ့ သူသုံးပါ
ငွေကို အသုံးပြုတဲ့ နေရာအပေါ် မူတည်ပြီး ငွေစုစာအုပ်ကို ခွဲထားရင် ငွေရဲ့လည်ပတ်မှုကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ – လစဉ်သုံးနေတဲ့ ငွေစာရင်း နဲ့ အနာဂတ်အတွက်ရည်မှန်းပြီး စုနေတဲ့ ငွေစုစာအုပ်ဆိုပြီး ခွဲထားရင်ကောင်းပါတယ်။ဘဏ်ဝန်ထမ်းတချို့ကတော့ …
၂. လစဉ်အသုံးစရိတ်အတွက် ငွေစာရင်း၊
၃. ငွေစုရန်အတွက် ငွေစုစာအုပ်
၂. ပိုက်ဆံကို သုံးရာတွင် စနစ်တကျသုံးပါ
ပိုက်ဆံကို စုတဲ့သူဆိုတာ မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ဘာမှကို မသုံးဘူး။ လိုအပ်ပြီဆိုရင်လည်း လိုအပ်သလို ရက်ရက်ရောရော အသုံးချပါတယ်။ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၃. ဖိနပ်ကို အမြဲတည်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားပါ
ကိုယ့်နဲ့အမြဲတည်း အချိန်အတော်များများကို အတူတူရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဖိနပ်ကလေးကို ဂရုတစိုက် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း
ထားနိုင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး အားလုံးကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြနေတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဖိနပ်ကလေးတောင်မှ သန့်ရှင်းအောင်မထားနိုင်ရင် ပိုက်ဆံလဲစုဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၄. ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကို အမြဲတည်းစနစ်တကျ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားပါ
ပိုက်ဆံစုနိုင်တဲ့သူဟာ ပိုက်ဆံအိပ်ကလေးကိုလည်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားပေးပါတယ်။များသောအားဖြင့် ပိုက်ဆံအိတ် အရှည်ကို သုံးကြတာများပါတယ်။ ဒါမှသာ ပိုက်ဆံအရွက်လေးတွေလည်း သက်သက်သာသာနေနိုင်မှာပါ။နောက်ပြီး ပိုက်ဆံရွက်လေးတွေလည်း ညီညီညာညာစီထားရင် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ဘယ်နေရာမှာ ဘာရှိလဲဆိုတာကို ချက်ချင်းတွေ့နိုင်မှာပါ။
၅. ATMစက်နား ခဏခဏမသွားပါနဲ့
ပိုက်ဆံကို စုနိုင်တဲ့ သူဟာ ၁လမှာ ဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ထားပြီး ငွေကိုထုတ်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ငွေကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်သုံးမှသာလျှင် ငွေကိုစုမိမှာပါ။
ဆရာ ကျနော့်အသက် ၄၂ နှစ်ပါ။ သဘာဝအသက်အရွယ်အရ ဆံပင်ကျွတ်တာကို လက်ခံနိုင်ပေမယ့် ထိပ်မပြောင်ချင်ဘူးဆရာ။ တော်တော်ကျွတ်နေလို့ပါ။ စာများမှာစိုးလို့ တိုတိုပြောတာ။
ဆံပင်ကျန်းမာရေးဟာ ကမ္ဘာမှာ ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာတန်တဲ့ စီးပွါးရေးဖြစ်တယ်။ ယောက်ျား-မိန်မ၊ လူကြီး-လူငယ်၊ အရွယ်မရွေး၊ လူမျိုးမရွေး ဖြစ်တယ်။ ဆံပင်ပြောင်နေတာဟာ Social stigma လူမှုရေးရာ နှိမ်စရာလို ဖြစ်သေးတယ်။ လူတယောက်မှာ ပျမ်းမျှ ဆံပင် တသိန်းရှိတယ်။ တလမှာ ၁ စင်တီမီတာ ရှည်တယ်။ ၂-၃ နှစ်တခါ အသစ် ပေါက်တယ်။ ၉ဝ% က တပြိုင်ထဲ ပေါက်လာတာ။ ဆံပင်အဟောင်းတွေအစား အသစ်တွေ ထပ်ထပ် ပေါက်နေတယ်။ ထပ်မပေါက်ရင် ထိပ်ပြောင်၊ ထိပ်ကွက်၊ ကတုံးဖြစ်လာမယ်။
ဆံပင်ကျွတ်တာကို ဆေးစာနဲ့ Alopecia လို့ခေါ်တယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာလဲ ယောက်ျားပုံစံ ကွက်ဖြစ်တာ နဲ့ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဖြစ်တဲ့ မိန်းမပုံစံ ရှိတယ်။ အချိန်တွေ အကြာကြီး ဆံပင်ကျွတ်နေတာမျိုးက မျိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရက်တိုတိုနဲ့ ဖြစ်တာဟာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ ရှိနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ သွေးအားနည်းတာ၊ လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း နည်းတာ-များတာ၊ ဆေးတချို့သောက်တာ၊ Eczema, Seborrhea and Psoriasis နှင်းကုလိုဦးရေခွံရောဂါတွေ၊ မှို-ဗက်တီးရီးယားရောဂါ၊ ဆံပင်သုံးပစ္စည်းတွေကနေထိခိုက်မိတာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ မကျန်းမမာဖြစ်တာ၊ ကလေးမွေးပြီးနောက် ၃ လမှာ ဆံပင်ကျွတ်တတ်တယ်။ အာဟာရ မမျှတတာတွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Traction alopecia ဆိုတာ ဆံပင်စတိုင်တချို့ကြောင့်ဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်။ ဆံပင်ကို တင်းနေအောင်လုပ်လို့ ဆံပင်ကျွတ်ရတယ်။ လူအမဲတွေ အများဆုံးလုပ်ကြတဲ့ပုံစံတွေပြောတာပါ။ ပြောင်းခင်းမြေကွက်တွေလို လုပ်တာမျိုး။ Ponytail, Pigtails ကလဲ တင်းနေရင်ဖြစ်မယ်။ American Hair Loss Council ကပြောတာက ပြန်ပြင်ရင် ပြန်ကောင်းမယ်။ ၆ လ အထိ စောင့်ရတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆံပင် ဖေါ်လီကယ်တွေကို ဒဏ်ရာလိုရရင် ခက်တယ်။
သွေးကျဲဆေး၊ ဂေါက်ရောဂါဆေး၊ သွေးတိုးကျဆေး၊ နှလုံးရောဂါဆေး၊ ဗီတာမင် အေ များတာ၊ ကိုယ်ဝန်တားတေးတွေနဲ့ စိတ်မကျဆေးတွေကြောင့်လဲ ဆံပင်၈ျွတ်တတ်တယ်။ scalp ဦးရေခွံကို မှိုပိုးကူးရင်လဲ ဖြစ်တယ်။ (လူးပတ်စ်) ရောဂါ နဲ့ ဆီးချိုရှိနေသူတွေမှာလဲ ဆံပင်ကျွတ်တတ်တယ်။
• (ဗီတာမင်) တွေအတွက် အသီး၊ အသီးအနှံ များများ၊
• (ပရိုတင်း) အတွက် အဆီလွတ်အသား၊ ဥ၊ တိုဖူး၊
• သိပ်ပြောင်နေအောင် ချွတ်မထားတဲ့ ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ ပြောင်ဖူး၊
• ပြုပြင်စီမံထားတဲ့ အစားတွေဗရှာင်ပါ။
• ဗီတာမင် ဘီ၊ စီ၊ ဖေါလစ်အက်စ်၊ သွပ်ဓါတ် နဲ့ ဘိုင်အိုတင် သောက်ပါ။
• L-cysteine and L-methionine (အမိုင်နိုအက်စစ်) သောက်ပါ။
• ဗီတာမင် အေ တနေ့မှာ 100,000 IU ထက်များတာ မကောင်းပါ။
• ခေါင်းလျှော်ရည် ပြင်းတာ မသုံးပါနဲ့၊ Baby shampoo သုံးနိုင်တယ်။ တနေ့တခါထက် မပိုစေနဲ့။ Moisturizing conditioner သုံးနိုင်တယ်။ ပြီးရင် ခြည်ထည် ပုဝါနဲ့ ပတ်ထားပါ။ ဆံပင်ခြောက်အောက် ပွတ်ချေတာ မလုပ်ပါနဲ့။
• Blow-dryer, Flatiron and Hairstyling tools တွေကို ဖြစ်နိုင်သလောက် မသုံးပါနဲ့။ အပူနည်းနည်း၊ အချိန်နည်းနည်းသာ သုံးပါ။ စိုနေတဲ့ဆံပင်ကို လိမ်မထားပါနဲ့။ တင်းနေအောင် စီးနှောင်မထားပါနဲ့။ ဆံပင်ပြင်ဘို့ ဓါတုဆေးပါတာတွေ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ပါ။ သဘာဝ အလှအပသုံးတွေသာသုံးပါ။
• စိတ်ဖိအားလျှော့ချနည်းကိုလဲ တချို့လူတွေအတွက်သုံးရတယ်။ ကြွက်တွေကို စမ်းသပ်တော့ Astressin-B,aCRF (corticotrophin-releasing factor) blocker ဆေးပေးတော့ ၄ လ အကြာမှာ ကျွတ်နေတဲ့ ကျောမွှေးတွေ ပြန်ပေါက်လာတယ်။
• ခွဲစိတ်ကုသနည်း၊ ၁၉၃၉ ကတည်းကတွေ့ခဲတဲ့ hair transplantation ကိုသုံးနိုင်တယ်။
• Immunosuppressants ရောဂါပြီးစနစ်နှိမ်ဆေး၊ ယာယီပြန်ကောင်းတာ တွေ့ရတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ သတိထားရမယ်။
• ဆံပင်ကျွတ်နေတာကို လူမမြင်အောင် ဖုံးကွယ်နည်းတွေလဲ သုံချင်ရင် သုံးနိုင်တယ်။
• Essential oil massage အဆီနဲ့နှိပ်နယ်ခြင်း၊ ဆံပင်အခြေနေရာတွေကို ဆီလိမ်းပြီး ပလပ်စတစ်နဲ့ ဖုံးအုပ်ပါ။ အပေါ်က ရေနွေးတဘက်နဲ့ ပတ်ထားပါ။ တညအိပ်ပြီး နောက်မနက်မှာ ပြောင်စင်အောင် ခေါင်းလျှော်ပါ။ တပါတ်တခါ အဲလိုလုပ်ပါ။
• ကြက်ဥ နဲ့ ပျားရည်နည်း၊ ကြက်ဥ ၂ လုံးက အဝါနှစ်နဲ့ ပျားရည် ဇွန်းသေး ၃ ဇွန်း ရောမွှေပါ။ ဆံပင်ကို သုတ်လိမ်းပါ။ မိနစ် ၃ဝ ထားပါ။ ပြောင်စင်အောင် ခေါင်းလျှော်ပါ။
• ရှားစောင်းလက်ပတ် နည်း၊ အပူလောင်နာတွေလဲ သုံးကြတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို (ကွန်ဒီရှင်နာ) အစားသုံးပါ။ ၁၅ မိနစ် နေရင် ဆေးကြောပါ။ ရေခပ်နွေးနွေးက ပိုကောင်းမယ်။
ဆံပင်ထပ်မကျွတ်အောင်နဲ့ ပြန်ပေါက်အောင်အတွက် ဆေးတွေကတော့
• Finasteride, Dutasteride and Minoxidil solution ဆေးတွေကို သုံးနိုင်တယ်။ Androgenetic alopecia အတွက် ကောင်းတယ်။ FDA ကနေ အသိအမှတ်ပြုထားတာတွေက Finasteride (Propecia) နဲ့ Minoxidil ဆေးတွေဖြစ်တယ်။
• Minoxidil (Rogaine, Regaine, Vanarex) ဆေးကို ကျားရော မပါ သုံးနိုင်တယ်။ သွေးတိုးအတွက်ဆေး ဖြစ်တယ်။
• Dutasteride (Avodart) ဆေးက Testosterone ကျား-ဟော်မုန်းကို တားပေးတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ (BPH) ယောက်ျား ဆီးကျိတ်ကြီး ရောဂါအတွက် သုံးတဲ့ဆေး ဖြစ်တယ်။
• Finasteride (Proscar and Propecia) ဆေးကလဲ အတူတူဘဲ။ ယောက်ျားအတွက်သာဖြစ်တယ်။ ဆေးတွေကို ၆ လ သုံးကြည့်ရတယ်။
မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အထောက်အပံ့ပေးဖို့ အမေရိကန်စောင့်ကြည့်နေ
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး၊ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားမျှတရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများကို ခိုင်မာအောင် မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် မဆုတ်မနစ် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချဲလ်ကတဆင့် ကတိပြုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ် ဒဲရစ်မစ်ချဲလ်က မေလ ၂၇ရက် နံနက်က ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးရုံးဟောင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံ မဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေးဗဟိုဌာနက ဦးစီးပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အမေရိကန်က မြန်မာရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာ အထောက်အပံပေးဖို့ ကြည့်နေတာပါ။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် မောင်းနှင်းဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံ အနာဂတ်ကို နိုင်ငံရဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံကသာ ဖန်တီးနိုင်တာပါ” ဟု ဒဲရစ်မစ်ချဲလ်က ဆိုသည်။
“အာဆီယံဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားသော မြန်မာ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် အမေရိကန် မြန်မာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုးရိုး စကိတ်က ကျတော်တို့ သိတဲ့အတိုင်း အားပိုစိုက်ရပါတယ်။ ဒီတော့ မိုင်နဲ့ချီတဲ့ မြို့တွင်း အပျာ်စီး စကိတ်သမားတွေအတွက် လျှပ်စစ် စကိတ်ဟာ ပိုပြီး ပျော်စရာတွေကို သယ်ဆောင်လာပေးပါတယ်။ အရင် က လျှပ်စစ် စကိတ်ဆိုလျှင် ဘီးကြီးကြီးတွေ၊ မော်တာကြီးတွေ နဲ့ ဧရာမ ဘတ္တရီရှိတဲ့ အရာဝတ္တု ကြီးတွေလိုပဲ မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်လည်း အရင်က အဲဒီလို ပုံစံရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဒါဟာပြောင်းလဲ သွားပါပြီ။
ယူကေမှာ ရှိတဲ့ Marbel အရုပ်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ အရွယ်အစား သေးငယ်ပေါ့ပါးပြီး ပုံမှန်စကိတ် အရွှယ်အစားလောက်ပဲ ရှိတဲ့ စကိတ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အပေါ့ပါးဆုံး လျှပ်စစ် စကိတ်ဘုတ် ဖြစ်ရမယ်လို့ အခိုင်အမာ ပြောဆိုလျက်ရှိပြီး အခြား နာမည်ကြီး
လျှပ်စစ်စကိတ်တွေထက်ပိုပြီး ပေါ့ပါးလှပသေသပ်လှတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အလေးချိန်ကို ဦးစားပေး ဖြတ်တောက်ထားသည့်နီးတူစွာ မြို့တွင်း မှာ ၁၀မိုင်လောက် စီးနင်းပြီးတာနဲ့ ဘတ္တရီဟာ အားပြန်သွင်းဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။တစ်နာရီကိုမိုင်၂၀အထိပြေးနိင်ပြီးပိုတောင် ကျော်လွန်နေနိင်ပါသေးတယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထို လျှပ်စစ် စကိတ်စီးသူများအနေနဲ့ စကိတ် ဘုတ်ပြားပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ခြေနင်း ခလုတ်တွေကတစ်ဆင့် ဌင်း၊ အရှိန် ၊ ဘရိတ် စသည့်တို့ကို ထိန်းချုပ်နိင်မျာ ဖြစ်ပြီး တစ်ချိုကတွေဆို App တွေကတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်ရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
Z Board လို့ အမည်ရှိတဲ့ လျှပ်စစ် စကိတ်ဘုတ်ဟာဆိုလျှင် Marbel လျှပ်စစ် စကိတ်ထက် ပိုလေးပေးမဲ့ ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာ သက်သာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Z Board ကတော့ ရှေ့မီးနောက်မီးတွေပါ တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ အတွက် ညအခါတွေမှာ ပါ အဆင်ပြေနိင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အခု Marbel လျှပ်စစ် စကိတ် ဟာ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် $1,199 ရှိပြီး ရေစိူခံမူတွေပါ ပါဝင်လာတဲ့ လျှပ်စစ် စကိတ်တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Aung Heine (Smart Pro Journal)
၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲ ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုအချို့ နေပြည်တော်တွင် ဖြစ်ပွား
နေပြည်တော်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီနှင့် ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသည့် အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး
လူထုလက်မှတ်ကောက်ခံပွဲကို ဆန့်ကျင်သည့်လှုပ်ရှားမှုအချို့ ရှိခဲ့သည်။
အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ မပြင်ဆင်ရေး၊ ၅၉(စ) မပြင်ဆင်ရေးအား ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ဆောင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုအချို့ ဖြစ်သွားသည့်အပြင် အချို့သောနေရာများတွင် လူနေအိမ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊
ကွမ်းယာဆိုင်အချို့တွင်လည်း ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ခြင်းအချို့ရှိခဲ့သည်ဟုလည်း စုံစမ်းသိရသည်။
ဆိုင်းဘုတ်များတွင် "ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်သွားနိုင်သည်"၊ "ပုဒ်မ ၅၉(စ)သည် ဗိုလ်ချုပ်ချမှတ်ခဲ့သော မူဖြစ်သည်"၊ "တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်သည့်အကြံ ဒို့လက်မခံ" ဟူသည့် ဆိုင်းဘုတ်များကို ကိုင်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
"ဆိုင်းဘုတ်တွေ ဘယ်အချိန်လာထောင်လဲတော့မသိဘူး။ ကျွန်တော် မနက် ၆ နာရီ အိပ်ရာထတော့ ဒါတွေတွေ့တာပဲ"ဟု အဆိုပါဆိုင်းဘုတ်များ လာကပ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်မှ
ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ပြန်ကပြေးကျေးရွာ၊ ဇီဇ၀ါပန်းအ၀ိုင်းအနီးတွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သူ ဦးမောင်မောင်ထွန်းဝင်းက "တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်စေချင်လို့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို မပြင်စေချင်တာပါ" ဟုဆိုသည်။
သို့သော် ယင်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူအချို့အား မေးမြန်းရာ၌ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်၊ ၁၀ တန်းဖြေဆိုထားသူ တစ်ဦးက ၎င်းအနေဖြင့် အခြေခံဥပဒေနှင့်ပတ်သတ်၍ မသိရှိကြောင်း၊ လာခေါ်၍
ထို့ပြင် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်တွင် ၄၃၆ မပြင်ရေးကို လူ ၁၀ ဦးခန့်ဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာတွင် ဦးဆောင်သူ ဦးအောင်မင်းက "ဒီပုဒ်မကိုပြင်လိုက်ရင် ပြည်သူတို့၏ အသက်
အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ ပျက်စီးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက် ဒီ ၄၃၆ ပုဒ်မကို ထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်တာပါ" ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုအများစုသည် ခွင့်ပြုချက်မရထားခြင်း မရှိဟု ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများက ဆိုသည်။
ဓာတ်ပုံ- ဟောင်ဆာ၊ ရာမည
ထိုင်းမယ်စကြ၀ဠာအလှမယ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချီးကျူးခံရတဲ့ မေမြတ်နိုး
Miss Universe ပြိုင်ပွဲသို့ စေလွှတ်ရန် ရွေးချယ်ထားသော ထိုင်းအလှမယ်ကို မနှစ်သက်သော ထိုင်းပရိသတ်များက မြန်မာအလှမယ် မေမြတ်နိုး၏ လှပမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများတွင် ဝေဖန်လျက်ရှိသည်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ် နေသည့် Miss Asia Pacific World အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လျက်ရှိသော မေမြတ်နိုးကို လှပပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကြော့ရှင်းသဖြင့် အံ့သြမိကြောင်း၊ ယခုယှဉ်ပြိုင်နေသော ပွဲထက် Miss Universe ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း ထိုင်းပရိသတ်များက လူမှုကွန်ရက်များတွင် မှတ်ချက်ပေးကာ ချီးကျူး ပြောဆိုကြသည်။
‘‘ကျွန်တော့်အမြင် ဒီနှစ်မြန်မာမယ်ကတော့ ခင်ဝင့်ဝါပြီးရင် အားအပေးဆုံးလို့ ထင်ရတယ်။ တော်တော်များများလည်း နှစ်သက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့။ မေမြတ်နိုးက သင်ယူရတာလွယ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ပုံစံ ပေါက်တယ်။ သူ့ရဲ့ အားသာချက်က အပြုံးပဲ။ ကျွန်တော် သူ့ရဲ့အပြုံးကို ပိုနှစ်သက်မိတယ်။ ထိုင်းမှာကျတော့ မေမြတ်နိုးရဲ့ Body ကို ပိုကြိုက်တယ်။ နိုင်ငံတကာ မီတယ်။ ထူးဆန်းတာက ထိုင်းတွေက အသားအရေကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုပဲ’’ ဟု ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိုင်းဘာသာစကား လေ့လာသင်ယူနေသော ကိုငွေတိုးက ပြောသည်။
ပြိုင်ပွဲကာလ ခုနစ်ရက် မြောက်နေ့အချိန်ထိ ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ် ၅၁ ဦးအနက် ဖိလစ်ပိုင်၊ အိန္ဒိယအလှမယ်များနှင့်အပြိုင် မြန်မာအလှမယ် မေမြတ်နိုးက သရဖူဆောင်းရန် ရေပန်းစားလျက်ရှိပြီး မြန်မာပရိသတ်များကလည်း မေမြတ်နိုး သရဖူရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်နေကြကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် အွန်လိုင်းမဲပေးရာတွင်လည်း မေမြတ်နိုးက ပထမနေရာ၌ ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပွဲကို မေလ၃၁ ရက်တွင် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ရှိ Hilton ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
မီဒီယာအများစု အသိမှတ်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ထွက်ရှိလာသော iPhone6ဒီဇိုင်း
ပြင်သစ် အခြေဆိုက် nowhereelse.fr က စလို့၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဂျပန် သတင်း မီဒီယာ နဲ့ တရုတ်ပြည် ဆိုရှယ် မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ဖော်ပြ ချက်များအရ ယခု ပုံမှာ မြင်တွေ့ နေရတဲ့ ဖုန်းဟာ iPhone6ဖြစ်ပါတယ်။ ၄.၇ လက်မ အရွယ် iPhone6ဖြစ်ပြီး ၅.၅ လက်မ အရွယ်လည်း ထွက်ရှိ အုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone 5S ထက် ပါးလွှာပြီး iPod Touch နဲ့တောင် ဒီဇိုင်း သိပ်မကွာ ဘူးလို့ ဝေဖန် ထားကြ ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်းမှာ iPhone6အလုံးရေ သန်း ၈၀ ထုတ်လုပ် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လမှာ ဖြန့်ချိ ရောင်းချမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ အရောက် မှာတော့ အရွယ် ပိုကြီးတဲ့ ၅.၅ လက်မ iPhone6ကို ဈေးကွက် ဖြန့်ချိ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာ 10 Megapixel pixel ရှိပြီး မှန်ဘီလူး အရည်အသွေး ပိုမို ကောင်းလာမယ် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ Display အတွက် ဂျပန် ကနေ မှာယူထားကြောင်း ဆိုပါတယ်။
တရုတ်ပြည် Foxconn စက်ရုပ်မှ ထွက်ရှိလာတဲ့ Leak ဖြစ်တာ ကြောင့် ယခု ဖော်ပြပါ ဒီဇိုင်းက မှန်ကန်နိုင်ချေ ပိုများ ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ပိုမို ပါးလွာ မှု အတွက် မျက်နှာပြင် touch နည်းပညာ အပြောင်းအလဲ ရှိကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် iPad ကို အီလက်ထရောနစ် နှင့် ဒီဂျစ်တယ် ပစ္စည်း အားလုံးကို ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ Universal Remote အဖြစ် အသုံးပြု လာနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး iPhone6မှာလည်း ပါဝင်နိုင်ချေ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားကြ ပါတယ်။
iPhone6ဒီဇိုင်းအား ပြသနေတဲ့ ဗီဒီယိုကို အောက်ပါ လခ့်မှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ ကိုယ်သိပ်သွား ချင်တဲ့ရောက်ချင်ခဲ့တဲ့ နေရာဒေသတစ်ခုကို စိတ်ထဲမှာ အစွဲကြီးစွဲတဲ့အခါ အိပ်မက်ထဲအထိ အဲဒီဒေသအကြောင်း အရာတွေဟာရောက်ရောက်လာတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန် တော်လည်း ဘဝမှာအရမ်းရောက်ခဲ့ချင်တဲ့နေရာတစ်ခု ကိုရောက်ခဲ့ရ တယ်လို့အိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီ နေရာဟာ အရမ်းကိုခေတ်မီတိုး တက်ထွန်း ကားနေတဲ့ နေရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ နေရာဟာ Shopping ထွက်ဖို့ အကောင်း ဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းမဟုတ်သလို မြင်တွေ့ သမျှ ဘဝင်ခိုက်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ အပန်းဖြေစရာ ဒေသတစ်ခု လည်းမဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး။ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို နှစ်နှစ်ကာ ကာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် မက်ခဲ့ဖူးတဲ့အိပ်မက် ကတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မဟာအောင်မြေဖြစ်တော်မူတဲ့ မဟာ ဗောဓိစေတီ တော်ကြီးရှိရာ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးနဲ့ ပရိ ဘောဂစေတီထိုက်တဲ့ မဟာဗောဓိပင်မြတ်ကြီးကို ကိုယ် တိုင်ကိုယ်ကျဖူးမြော်ရတယ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ပါပဲ။
အဲဒီအိပ်မက်ကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေတဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုကို အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ စီမံပေးမှုနဲ့ မြန်မာ၊ သတင်းစာ/ဂျာနယ်လစ်များရဲ့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အ ဖြစ် ရှစ်ရက်ကြာသွားရမယ့်ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော် လိုက်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကတည်းကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပြည်ပခရီးတွေဆက်တိုက်ဆိုသလို သွား ဖြစ်နေလို့ ခရီးပန်းနေပေမယ့် ဗုဒ္ဓရဲ့မဟာမြေမြတ်ကို ကိုယ်တိုင် ရောက်ရှိဖူးတွေ့ခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော် မှုကတော့ ဒီခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါဖြစ်ဖို့ အဓိကအကြောင်း တရားတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
India Airway ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတင်းအဖျင်းသတင်းတွေကို မသွားခင်ကတည်းက ပလူပျံအောင် ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့စထွက်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲ အမှန်တကယ်ထွက်ခွာရမယ့် မွန်းလွဲ ၂နာရီအစား ထွက်ခွာချိန်သုံးကြိမ်ပြောင်းပြီး နောက် ညနေ ၅နာရီခွဲကျမှ လေယာဉ်ဟာ အမှန်တကယ် ထွက်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မူလရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ဂယာ လေဆိပ်ကိုလည်း လေယာဉ်ကမဆင်းနိုင်တော့ဘဲ လမ်းကြောင်းပြောင်းကာ ကိုးလ်ကတ္တားမှာတစ်ညအိပ် ရပါမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို လေယာဉ်ပေါ်မှာ တင်ပဲသိ လိုက်ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ပုံမှန်ပြေးဆွဲပေး နေတဲ့ လေယာဉ်တွေ ဟာ India Airline လေယာဉ်တွေထဲမှာ အနုံချာဆုံးဆိုတာကို ခရီးစဉ်နောက်ပိုင်းမှပဲ သိခဲ့ရပါတယ်။ အသက် ၄ဝကျော် လေယာဉ်မယ် ကြီးတွေရဲ့ အပြုံးအရယ် မဲ့တဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ ဆောင့် ဆောင့်အောင့် အောင့် ဝန်ဆောင်မှုကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံရတော့မှပဲ India Airline ဟာ မကြာခင်ဒေဝါလီခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ ကောလာဟလသတင်းစကား ဟာဟုတ်မှာပဲလို့ မှတ်ချက်ပြုမိ ပါတော့တယ်။ ဗက်နဲ့နန်းဗက်ကိုနားမလည်လို့ ထမင်း ငတ်ရမလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကလည်း အမှတ်တရပါပဲ။ ဗက်ဆိုတာ Vegetarion ၊ နန်းဗက်ဆိုတာ အသားစား တာလို့ စိတ်မရှည်စွာရှင်းပြရင်း နန်းဗက်စားစရာကို လက်ထဲထိုးပေးသွားတဲ့ လေယာဉ်မယ်ဘွားဘွားရဲ့ Service ကတော့ တကယ်ကိုအမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ ကိုးလ်ကတ္တားဟာ အချိန်နှစ်နာရီလောက်ပျံ သန်းရပြီး ဒေသစံတော်ချိန် ၆နာရီလောက်မှာ ကိုးလ် ကတ္တားလေဆိပ်ကိုရောက်ပါတယ်။ ပါလာတဲ့လက်မှတ် ထဲမှာ ဆင်းရမယ့် လေဆိပ်က ဂယာ၊ အခုရောက်နေတဲ့ လေဆိပ်က ကိုးလ်ကတ္တားဆိုတော့ လေဆိပ်အထွက်မှာပဲ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက ရစ်တာခံရတော့တာပါပဲ။ ဒီလို နဲ့လေဆိပ်မှာ တစ်နာရီလောက်ထပ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာ တော့ လေကြောင်းလိုင်း ကစီစဉ်ပေးတဲ့ ကိုးလ်ကတ္တား မြို့ထဲက Hotel တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချီတက် ကြပါတော့တယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးရဲ့ အကြာဆုံးရွေး ကောက်ပွဲကာလနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အ တွက် လမ်းဘေးဝဲယာတွေမှာ မဲဆွယ်နေကြတဲ့ပွဲတွေ ကိုလည်း ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်မြင်ခဲ့ရပါတယ်
ဆောက်လက်စတံတားတွေ၊ အဆောက်အ အုံတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီး လေဆိပ်က ၁ဝ မိနစ် လောက်မောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော် တို့ တစ်ညတာတည်းခိုကြရမယ့် monotel luxury business hotel ကိုရောက် ပါပြီ။ ကားပေါ်ကဆင်းတယ်ဆိုရင်ပဲ ပြုံးရွှင်တဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ လိုအပ်ချက်မရှိအောင် ကူညီဆောင် ရွက်ပေးနေကြတဲ့ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကြောင့် ဟိုတယ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု အဆင့်ကိုမကြာခင်ပဲ သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ှနမလငခန နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် လေ့လာစရာ တွေအများကြီးရမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်း လေ့လာသင်ယူစရာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ (Four Star) ကြယ် လေးပွင့်အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်အလတ်စား ဖြစ်ပေမယ့် တည်ဆောက်ထား
တဲ့အခန်း Design တွေက တော် တော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ်။ အခန်းတိုင်း ရေပူ၊ ရေအေးနဲ့ TV Mini Bar စသည်ဖြင့် ပြည့်စုံစွာ ထားပေးထားပြီး ဟိုတယ်ရဲ့အထူး ခြားဆုံးဝန်ဆောင်မှုကတော့ ဝန် ထမ်းတိုင်းရဲ့ ပြုံးရွှင်ဖော်ရွေတဲ့ဟန် ပန်နဲ့ ဧည့်သည်ကို ဂရုစိုက်မှုပါပဲ။ အဲဒီနေ့ကညစာကို (မြန်မာစံတော် ချိန်) ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှစားခဲ့ရ ပြီး မှတ်သားခဲ့မိတာက အိန္ဒိယရဲ့ ထုံးစံက ညစာကို ည ၉နာရီနောက် ပိုင်းမှစားကြတာများပါသတဲ့။ ဘူ ဖေးစနစ်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အိန္ဒိယ စတိုင် ညစာကခံတွင်းတွေ့ပြီး တော် တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ ကောင်းနိုးရာရာဟင်းကအစရွေး ပေးပြီး မညည်းမညူဝန်ဆောင်မှု ပေးခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေက တော့ တကယ့်အသိအမှတ်ပြုစရာ ပါပဲ။
နောက်နေ့မနက်စော စောမှာတော့ ဂယာကိုချီတက်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့တွေ ဟိုတယ်က စောစီးစွာချီတက်ကြရပါတယ်။ နံနက်စာ Breakfast ကအစပြင်ဆင်ပေးပြီး လေဆိပ်အထိလိုက်ပို့ပေးတဲ့ ဟိုတယ်မန်နေဂျာကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ အသက် ၃ဝကျော်အရွယ် ရည်မွန်ဖော်ရွေတဲ့ ဟိုတယ် မန်နေဂျာနဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံ တွေ ဝန်ထမ်းတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပုံတွေကို ဗဟုသုတ ဖြစ်ဖွယ်လေ့လာ ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ ကိုးလ်ကတ္တားနဲ့ ဂယာဟာ လေယာဉ်နဲ့ နာရီဝက် လောက်ပျံသန်းရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး ကိုးလ်ကတ္တားနဲ့ ဒေလီအကြားမှာရှိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လေ ကြောင်းလိုင်းက ဂယာမှာမဆင်းလို့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ဒေလီအထိလေယာဉ်စီး၊ အဲဒီကတစ်ဆင့် ဂယာကိုပြန် လာရမှာဖြစ်လို့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ အလဟဿဖြစ် ခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရခရီးစဉ်ပါပဲ။
ကြီးမားလွန်းတဲ့ ဒေလီလေဆိပ်ကြီးထဲမှာ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ နှစ်နာရီလောက်ကြာအောင် ဂယာ ကို ပြန်သွားရမယ့်လေယာဉ်ကို စောင့်ကြရပါတယ်။ စတိုးဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ စည်ကားလှတဲ့ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကြီးထဲမှာ စိတ်ပျက်စရာကတော့ Internet WiFi သုံးမရတာပါပဲ....
ဈေးဝယ်တာဝါသနာပါတဲ့ ညီငယ်ညီမငယ် တွေပါလာတဲ့ ဒေါ်လာငွေလေးတွေအပြိုင်လဲပြီးရတဲ့ အချိန်မှာ Duty Free Shopping လုပ်ကြပါတယ်။ ကျန် တဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ တွေကတော့ မြန်မာ့စာနယ်ဇင်း လောကရဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်တွေကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ငြင်းခုံကြရင်းနဲ့ပဲ လေဆိပ်ထဲက နှစ်နာရီဟာ ဘယ်လို ကုန်သွားမှန်းမသိဘဲ ဂယာကို IA နဲ့ပဲ ဆက်လက်ချီ တက်ကြပါတယ်။
ပျံသန်းချိန် နှစ်နာရီနီးပါးကြာပြီးတဲ့နောက် မှာတော့ ဂယာမြို့လေဆိပ်ကို ကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့ လေယာဉ်ဆင်းသက်ပါပြီ။ လေယာဉ်မှာတော့ ဘုရား ဖူးလာတဲ့ ခရီးသည်တော်တော်များများကိုတွေ့ရပြီး အများစုကတော့ ရဟန်း တော်တွေနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ပါပဲ။ လေယာဉ်ပြင် ပကိုရောက်ချိန်မှာ တော့ ညနေခင်းအ ပူဆုံးအချိန်ဖြစ်နေ ပါပြီ။ ၄၂ စင်တီဂ ရိတ်ရှိတဲ့ နေပူထဲ ကိုဖြတ်ပြီး အတန် ငယ်လှမ်းတဲ့ လေ ဆိပ်ထဲကို လမ်း လျှောက်ဝင်ရချိန် မှာတော့ ဂယာလေ ဆိပ်ဟာ ISO Cer- tificate 9001/ 2000 ရလေဆိပ် ဖြစ်ကြောင်း အ မှတ်အသားနဖူး စည်းစာတန်းကြီး နဲ့ နှစ်ထပ်အ ဆောက်အအုံကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဂယာလေဆိပ် ဟာ တရုတ်ဟန် နဲ့ အိန္ဒိယပုံစံ ပေါင်းစပ်ထား တယ်လို့မြင်ရပေမယ့် လေ ဆိပ်ရဲ့အလယ်မှာတော့ ရွှေရောင်တောက် နေတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဆင်းတုတော်ကြီးတစ်ဆူကို ကြည်ညိုဖွယ်ရာဖူးတွေ့ ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုရားဖူးတွေသာ အများဆုံး လာရောက်တတ်တဲ့ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ လေဆိပ်ကိုရောက် ရောက်ချင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကို ဖူးမြော်ရအောင် စီစဉ်ထားပေးတဲ့အတွက်များစွာကြည်နူးပီတိဖြစ်မိပါ တယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့အောင်မြေကို ခြေချမိပြီဆိုတဲ့အသိက ကျွန် တော်တို့ အားလုံးအတွက် အားသစ်တွေလောင်းပေး လိုက်သလိုပါပဲ။
Flower News Journal | အတွဲ(၁၀) အမှတ် (၂၀)
၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး တပ်မတော်သားများ လက်မှတ်ထိုးရန် ဒေါ်စုတိုက်တွန်း
ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုး လှုပ်ရှားမှုမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံသားတွေအားလုံး လက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
နေပြည်တော်နယ်မြေ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ပြီး ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အဖွင့်အမှာစကား ပြောဆိုခဲ့ရာမှာ ထည့်သွင်း တိုက်တွန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “၀န်ထမ်းများလည်း ထိုးပိုင်ခွင့် ရှိတယ်နော်။ ဒါ ကျမ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတာ၊ ဘယ်ဥပဒေကမှ ၀န်ထမ်းများ လက်မှတ်မထိုးရဘူးဆိုတာ မပါဘူး။ အဲဒီတော့ ၀န်ထမ်းတွေကို ခြိမ်းခြောက်ပြီးတော့ မထိုးရဘူး။ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းတယ်လို့ ပြောလို့ရှိရင် ကျမတို့ကို အသိပေးပါ။ ဒီလို ခြိမ်းခြောက်တာကိုက ဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူးလို့ ကျမ ပြောချင်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
“တပ်မတော်သားဆိုတာလည်း နိုင်ငံဝန်ထမ်းပဲ။ လာပြီးတော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဒီ လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ လက်မှတ်ထိုးကြပါလို့ ကျမအနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။”
ကြည်း၊ ရေ၊ လေ တပ်အင်အားစု ၃ သိန်းကနေ ၅ သိန်းအကြား ရှိနေတဲ့ တပ်မတော်ဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ မတူ ကွဲပြားခြားနားစွာနဲ့ လွှတ်တော်မှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံစရာ မလိုပဲ အလိုအလျောက် ၄ ပုံ ၁ ပုံ ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ရယူထားပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ ပြည်သူလူထု ဆန္ဒအပေါ်မှာ အခြေခံထားခြင်း မရှိတာကြောင့် ဒါကို ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ဘာကြောင့် ပြောင်းဖို့ စရလဲဆိုတာ သူက ရှင်းပါတယ်။
“၄၃၆ အရဆိုရင် ခပ်တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ ရှင်းအောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ သဘောတူညီမှုရှိမှ ဒီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကို ပြင်လို့ ရတယ်။ ပြီးတော့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကို ခန့်အပ်ပြီးတော့ တာဝန်ပေးတာဟာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်တယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များဟာ မဲပေးကြတယ်။ ဒီတော့ ခြုံပြီးပြောရရင် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ ဆန္ဒအရ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြောင်းတာ၊ မပြောင်းတာဟာ ဖြစ်ရတယ်။ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီကျလား စဉ်းစားကြည့်ပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ နိုင်ငံသားတိုင်းအနေနဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုး လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ ပါတီတဖွဲ့၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအတွက်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရဲ့ ရေရှည်အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတ၀န်း ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပြီး မေ ၂၇ ရက်နေ့ကနေ ဇူလိုင် ၁၉ အထိ လက်မှတ်ရေးထိုး လှုပ်ရှားမှုကို ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူတွေက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ ကိုထောက်ပြပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေနဲ့ နှိုင်းစာရင် ပြင်ဆင်ရန် အလွန်ခက်ခဲတယ်လို့ ထောက်ပြနေကြတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ နားဆင်ရန်
ခုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေရင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေသည့် မန်နူယ်အူရီဘီကို လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်က တွေ့ရစဉ်
မက္ကဆီကိုစီးတီး- ကမ္ဘာ့ကိုယ်အလေးချိန် အများဆုံး လူစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သော မက္ကဆီကန်အမျိုးသား မန်နူယ်အူရီဘီသည် အသက် (၄၈) နှစ်အရွယ် မေလ ၂၆ ရက်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၁၂၃၀ ဖြင့် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ခဲ့သော မန်နူရယ်အူရီဘီသည် ကိုယ်အလေးချိန် ၈၆၇ ပေါင်ခန့်အထိ လျှော့ချခဲ့သည်။
မန်နူရယ် အူရီဘီ သေဆုံးမှုကို မွန်တားရေးမြို့ရှိ Nuevo Leon ကျန်းမာရေးဌာန အရာရှိတစ်ဦးက အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အူရီဘီသည် ကိုယ်တိုင်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခုတင်ပေါ်၌သာ နေခဲ့ရသည်။ နှလုံးခုန်သံမမှန်သောကြောင့် မေလ ၂ ရက်တွင် ၎င်းကို အရေးပေါ်ဌာနနှင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအလုပ်သမားများက ၀န်ချီစက်ဖြင့် သယ်မ၍ ဆေးရုံသို့ ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အူရီဘီသေဆုံးရသည့် အကြောင်းရင်းကို ဆရာဝန်များက တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ၎င်းသည် နှလုံးရောဂါအပြင် အသည်းရောဂါလည်း ရှိသည်ဟု သိရသည်။
၎င်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကလောက်ဒီယာဆောလစ်ဆိုသူနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။
အူရီဘီသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၂၅၀ ကျော်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်သည် ပူဖောင်းကဲ့သို့ ဖောင်းကားလာခဲ့သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်းသည် အိပ်ရာမှ မထနိုင်တော့ဘဲ အစာစားရန်နှင့် သန့်ရှင်းရေးတို့အတွက် မိခင်နှင့်သူငယ်ချင်းများအပေါ် မှီခိုခဲ့ရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ ဆတ်ရိုးကျ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် နေထိုင်သူ (၁၀) ရက်သားအရွယ် ကလေးမိခင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား သူ၏ ဖခင်နှင့် ဖောက်ပြန်သည်ဟုဆိုကာ သားဖြစ်သူက ဓါးဖြင့် ခုတ်သတ်
ဆတ်ရိုးကျ ရခိုင်ဒုက္ခသည် စခန်း (ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ ဆတ်ရိုးကျ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် နေထိုင်သူ (၁၀) ရက်သားအရွယ် ကလေးမိခင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား သူ၏ ဖခင်နှင့် ဖောက်ပြန်သည်ဟုဆိုကာ သားဖြစ်သူက ဓါးဖြင့် ခုတ်သတ်လိုက်သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
သေဆုံးသူအမျိုးသမီးမှာ စစ်တွေမြို့ဆတ်ရိုးကျ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း အမှတ်(၂)တွင်နေထိုင်သူ ဒေါ်လှသိန်းဦး အသက်(၄၂) နှစ်ဖြစ်ကြောင်း အမှတ် (၂)စခန်းမှူးက နိရဉ္စရာသို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“ မေလ ၂၃ ရက် ညနေ ၈ နာရီ ၄၅မိနစ်အချိန်မှာ စကားများရန်ဖြစ်ရာကနေ မောင်စံသိန်း အသက်(၂၁)နှစ်က ဒေါ်လှသိန်းဦးကို ဓါးနဲ့ ခုတ်သတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မောင်စံသိန်းက ဓါးဖြင့် ခုတ်သတ်သည့် အခြေခံ အကြောင်းအရင်းကိုလည်း သူက ယခုလို ပြောသည်။
“တရားခံက ဒေါ်လှသိန်းဦးကို သူ့အဖေနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ ပြောပြီးတော့ အသင့်ကိုင်ဆောင်လာတဲ့ သုံးပေလောက်ရှိတဲ့ ဓားရှည်နဲ့ ခုတ်သတ်လိုက်တာလို့ သိရတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်လှသိန်းဦး၏ ရင်ဘတ်တွင် ဓားဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ဦးခေါင်းတွင် ဓားဒဏ်ရာ တစ်ချက်စီရရှိပြီး အခင်းဖြစ်သော နေရာ၌ပင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း စခန်းမှူးက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
မောင်စံသိန်းအား စစ်တွေမြို့ နယ်မြေ(၂)ရဲစခန်းမှ ချက်ချင်း ဖမ်းဆီးကာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် စစ်တွေ ပြည်နယ် တရားရုံးတွင် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသွားသူ ဒေါ်လှသိန်းဦးမှာ သားသမီး (၇)ဦးကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး အငယ်ဆုံး ကလေးမှာ (၁၀) ရက် အရွယ်သာ ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ဒေါ်လှသိန်းဦး၏ အလောင်းအား မေလ ၂၄ ရက် နေ့လည် ၂ နာရီအချိန်က သဂြိုလ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။
စမတ်ဖုန်း ကင်မရာများကြောင့် အမှတ်တရ ခံစားချက်မျိုး လျော့နည်းလာ
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများမှ ကင်မရာများကို အသုံးပြုမှု အလွန်များပြားလာခြင်းသည် လူသားများ၏ အမှတ်တရ ခံစားတတ်မှုမျိုးကို သွယ်ဝိုက်သော နည်းလမ်းဖြင့် ဖျက်ဆီးနေခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်တစ်ဦးက သတိပေး ပြောကြားခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် လူသားများသည် နေရာတစ်ခု၊ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို တခုပ်တရ မှတ်သားရန်ထက် စမတ်ဖုန်းမှ ကင်မရာကိုဖွင့်ကာ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူရန်သာ အဓိကထား အားထုတ်ကြတော့ကြောင်း ယင်းကဏ္ဍကို လေ့လာနေသည့် သုတေသီ တစ်ဦးက ထောက်ပြခဲ့သည်။ မိမိတို့နှင့် ဆက်နွယ်သမျှကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်း၊ Social Mediaများတွင် ဝေငှခြင်းတို့ကိုသာ အရေးတကြီး လုပ်ဆောင်နေခြင်းသည် လူသားများ၏ ပင်ကို မှတ်ဉာဏ်နှင့် အမှတ်တရ ခံစားတတ်မှုတို့ကို ထိခိုက်စေကြောင်း နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ ဝယ်လင်တန်ရှိ ဗစ်တိုးရီးယား တက္ကသိုလ်မှ စိတ်ပညာ ပါမောက္ခ မာရီယန်နီဂါရီက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်မအမြင်မှာတော့ လူတွေဟာ အမှတ်တရ ခံစားရမယ့် အခိုက်အတန့်လေးတွေကိုတောင် လွှင့်ပစ်နေကြပါပြီ။ ထားပါတော့။ တကယ့်ကို လှပတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကို ရောက်တဲ့အခါ သူတို့ဟာ ဓာတ်ပုံပေါင်း ထောင်နဲ့ချီ ရိုက်လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီဓာတ်ပုံတွေကို ချောင်ထိုးထားမှာပဲ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အဲဒီတုန်းက အခိုက်အတန့်အကြောင်း ပြန်တွေးရင် လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အမှတ်တရ စွဲကျန်ခဲ့တာ အင်မတန် နည်းသွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတွေက အမှတ်တရ တစ်ခုခုကို ခံစားမှု နည်းသွားပြီ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို Tagဖို့က ဦးစားပေး ဖြစ်သွားတယ်လေ”ဟု သူမက ရှင်းပြခဲ့သည်။
ပါမောက္ခ ဂါရီက “ကျွန်မအမြင်မှာတော့ ဒါဟာ လူသားစွမ်းရည်တစ်ရပ် ယုတ်လျော့ခြင်းလို့ ညွှန်ပြနေပါတယ်။ ခုခေတ်ကာလမှာ လူတွေဟာ ကိုယ်တိုင် ခံစားဖို့ထက် အီလက်ထရောနစ် ကိရိယာတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ပဲ အင်မတန် စိတ်အားထက်သန်နေတတ်တယ်လေ”ဟုလည်း မှတ်ချက်ပြုသွားခဲ့သည်။
ပြည်ပကုမ္ပဏီများသို့ ပေးရန်ရှိသည့် ပဲကြွေး ငါးပုံတစ်ပုံ ပေးချေပြီးဟုဆို
ပဲဈေးများ ထိုးကျသည်အထိ ရိုက်ခတ်မှု ပြင်းခဲ့သော မေလ ပထမပတ် အတွင်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ပဲလောက ငွေကြေး အရှုပ်တော်ပုံ ကိစ္စတွင် ပြည်ပကုမ္ပဏီများသို့ ပေးရန်ရှိသည့် အကြွေး၏ ငါးပုံတစ်ပုံကို ပေးဆပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပဲမျိုးစုံနှင့် နှမ်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းဘဉာဏ်က ပြောကြားသည်။
ယင်းပဲလောက ငွေကြေး အရှုပ်တော်ပုံအတွင်း အဓိက ပါဝင် ပတ်သက်နေသည့် မိုးသက်ကုမ္ပဏီသည် ပြည်ပကုမ္ပဏီ ၁၅ ခုကို ပဲတီစိမ်းတန်ချိန် ၁၅,၀၀၀ ပေးဆပ်ရန် ရှိပြီး ယခု မေလ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ပဲတန်ချိန် ၃,၀၀၀ ခန့်ကို သင်္ဘောတင်ပို့ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“သင်္ဘောရတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ဆက်လက် တင်ပို့သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ အသင်းအနေနဲ့ကတော့ ဒီကုမ္ပဏီကို ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာ မစဉ်းစားရသေးဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ပြည်ပသို့ ပြန်လည် ပေးဆပ်ရန် ရှိသည့် ပဲများကို သင်္ဘောတင်ပြီးသည် အချိန်ထိ ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေး ကော်မတီက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကော်မတီက မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
မိုးသက်ကုမ္ပဏီထံမှ ပဲကြွေးရရန် ရှိသူများကိုမူ မေလ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြန်လည် ပေးဆပ်လျက် ရှိကြောင်း ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေး ကော်မတီထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ငွေကြေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပဲမျိုးစုံနှင့် နှမ်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ဘုရင့်နောင် ကုန်စည်ဒိုင်တို့က ညှိနှိုင်း ဖြန်ဖြေရေး ကော်မတီဖွဲ့၍ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပဲလောက ငွေကြေးဂယက် စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မေလ ၄ ရက်နေ့မှ မေလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ပြည်တွင်း မတ်ပဲဈေးများမှာ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာရာ မတ်ပဲ တစ်တန်လျှင် ကျပ်ခုနစ်သောင်း ဝန်းကျင်ခန့်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အဆိုပါ မတ်ပဲဈေးများမှာ မူလဈေး ဝန်းကျင်သို့ ပြန်လည် ကျဆင်းလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပဲလောက ကုန်သည် အသိုင်းအဝန်းမှ သိရသည်။
ပဲလောကအတွင်း ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံ ဂယက်သည် မေလ ပထမပတ် အတွင်းက နောက်ဆုံး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် မတ်လအတွင်း ပြည်ပကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုနှစ်နှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ငွေကြေး ပြဿနာတွင်မူ အဓိက ပါဝင် ပက်သက်နေသည့် Great Light ကုမ္ပဏီသည် ပြည်ပကုမ္ပဏီများသို့ ပေးဆပ်ရန် ရှိသည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၃ သန်း၏ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ပေးချေပြီး ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပဲမျိုးစုံနှင့် နှမ်းလုပ်ငန်းရှင် အသင်းထံမှ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက သက်တော် ၇၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Hua Chi ကိုယ်တော်ဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ နေရာတစ်နေရာတည်းမှာ နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာ ၀တ်ပြုပြီး သစ်သားကြမ်းပြင်မှာ ခြေရာတစ်စုံ စွဲကျန်ရစ်စေ ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ရာကျော်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ သစ်သားခင်းမှာ ကိုယ်တော်ဟာ ၃ စင်တီမီတာ အနက်ရှိတဲ့ ခြေရာနှစ်ခုကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီး စွဲထင်စေခဲ့တာပါ။
Monk's footprints sign of faith.
လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့များ မကြာခဏ ဝင်ရောက်လေ့ ရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ဦးဒေါင်းကျေးရွာအုပ်စု ဇုံမာဘင်္ဂါလီကျေးရွာ ဒေသခံများထံမှ ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းယူသည့် ဘင်္ဂါလီတစ်ဦးကို သေနတ်နှင့်အတူ မေလ ၂၅ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ဦးဒေါင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်မောင်က ပြောကြားသည်။
ဇုံမာကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် ဘင်္ဂါလီများထံမှ ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းယူရန် ကြိုးပမ်းသည့် အသက် ၃၀ နှစ် အရွယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီအမျိုးသား မာမက်ယာဆိန်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ နေအိမ်ကို ထပ်မံစစ်ဆေး ရှာဖွေရာတွင် လက်လုပ် တစ်ချက်ပေါက် သေနတ်တစ်လက်နှင့် ကျည်နှစ်တောင့် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ယင်းဖမ်းဆီးမှုတွင် လိုက်ပါခဲ့သူ ၎င်းကဆိုသည်။
မာမက်ယာဆိန်းသည် ၎င်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ ဒိုရိုဇင်နှင့် ယာ့ယာ့ဆိုသူ နှစ်ဦးကို လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ကာ အဒူလာကိန်း အမည်ရ ဓားပြအဖွဲ့က ငွေငါးသိန်း တောင်းနေသည်ဟု ဆိုကာ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ငွေတောင်းခံရသူများနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း လှည့်ကွက်ဆင်၍ ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း ဦးတင်မောင်က ပြန်လည်ရှင်းပြသည်။
“ငွေနှစ်သိန်း ထုတ်ပေးခိုင်းလိုက်တယ်။ ငွေပေးတဲ့ အချိန်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ခေါ်ပြီးတော့ ဖမ်းလိုက်တယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မာမက်ယာဆိန်း ဆိုသူကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှု၊ ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းယူမှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံထုတ် ဖုန်းလိုင်းကတ် ကိုင်ဆောင်မှုတို့ဖြင့် မောင်တောမြို့နယ် တရားရုံးတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဒေသအာဏာပိုင်များထံမှ သိရှိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လယ်သမားတွေ ရစရာရှိတဲ့ စပါးဖိုးငွေတွေကို အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ စထုတ်ပေးနေပါတယ်။
အရင် အစိုးရလက်ထက်က အငြင်းပွားဖွယ် နိုင်ငံတော် စပါးဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်အောက်မှာ နိုင်ငံတ၀ှမ်းက လယ်သမား ၈ သိန်းဟာ စပါးဖိုး ဘတ်ငွေ ၉၀ ဘီလီယံလောက်ကို ရဖို့ လနဲ့ချီ စောင့်ဆိုင်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ပြဿ နာကို ဖြေရှင်းဖို့ ထိုင်းဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဆီက ဘတ်ငွေ ဘီလီယံ ၅၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒဿ မ ၅၃ ဘီလီယံ) ကို ချေးယူပြီး လယ်သမားတွေကို ပေးချေသွားမယ်လို့ စစ်အစိုးရသစ်က ကြေညာထားပါတယ်။
၁ လအတွင်း အပြီး ပေးချေသွားမယ်လို့ ကြေညာပြီး မေ ၂၆ ရက်နေ့က စတင်ထုတ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင် အစိုးရလက်ထက်က နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကြောင့် လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးနောက် အိမ်စောင့်အစိုးရရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အကန့်အသတ်တွေကြောင့် စပါးဖိုး အကြွေးတွေ ကြန့်ကြာခဲ့ရပြီး နယ်က လယ်သမားတွေ ဘန်ကောက်မြို့အထိ ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ယင်းလပ်ရဲ့ ပွေထိုင်းပါတီ အစိုးရလက်ထက်မှာ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး ထက် ပိုပေးတဲ့ စပါးဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပြီး ငွေကြေး မလုံလောက်တဲ့ ပြဿ နာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီ စပါးဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်မှာ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို အဲဒီအချိန်က ၀န်ကြီးချုပ် ယင်းလပ်က သိလျက်နဲ့ တာဝန်ပေါ့လျော့ခဲ့တယ်လို့ အဂတိလိုက်စားမှု ကော်မတီိက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
လယ်သမားတွေ ရစရာရှိတဲ့ စပါးဖိုးငွေတွေကို အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရက ထုတ်ပေးနေပေမယ့် အခုအချိန်အထိ အစိုးရ စပါးဂိုဒေါင်တွေမှာ သောင်တင်နေတဲ့ စပါးပုံကြီးကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
ယင်လတ် ရှင်နာဝပ်ကို ပြန်လွှတ်လိုက်သော်လည်း ပိုမို ကြီးထွားလာမယ့် အရိပ်အယောင်တွေရှိနေ
ထိုင်းစစ်တပ်က ခေါ်ယူထိမ်းသိမ်းထားတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း
ယင်လတ်ရှင်နာဝပ်ကို မနေ့ညနေပိုင်းက ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဟာ အခြားသော စစ်အာဏာသိမ်းမှုများအတိုင်း
ဖြစ်လာနေပြီလို့ လေ့လာသူတွေက ပြောပါတယ်။
လေ့လာသူတွေခန့်မှန်းခဲ့ကြတဲ့အတိုင်း ညမထွက်ရအမိန့်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး
ကြေငြာချက်များ၊ ရုပ်သံမှ စစ်ချီတေးထုတ်လွှင့်မှုများနောက်ပိုင်း
မီဒီယာဆင်ဆာနဲ့ ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းမှုတွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ အခုတကြိမ်
အာဏာသိမ်းမှုဟာ အရင်အကြိမ်များနဲ့မတူဘဲ ဒေါသတွေပါနေပြီး တင်းမာမှု
ပိုကြီးမားပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေက အခု အချိန်မှာ လူရာဂဏန်းမျှ
နည်းပါးသေးငယ်ပေမယ့်လည်း ပိုမို ကြီးထွားလာမယ့်
အရိပ်အယောင်တွေရှိနေတယ်လို့ ဘန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ဘီဘီစီသတင်းထောက်က
တရုတ်သင်္ဘော ဝင်တိုက်သဖြင့် ဗီယက်နမ်ရေယာဉ်တစ်စင်း နစ်မြုပ်
နှစ်နိုင်ငံ ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တောင်တရုတ်ပင်လယ် ရေပြင်တွင် တရုတ်ရေယာဉ်တစ်စင်း ဝင်တိုက်သဖြင့် ဗီယက်နမ် ရေယာဉ်တစ်စင်း နစ်မြုပ်သွားကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံ တင်းမာမှုများ အမြင့်မားဆုံး အခြေအနေ၌ ရှိနေစဉ် ယခုသတင်း ပေါ်ထွက်လာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုဖြစ်ရပ်တွင်လည်း နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရများက အပြန်အလှန် ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်နေသည်။ ဗီယက်နမ်က မိမိတို့၏ ရေယာဉ်ကို တရုတ်ရေယာဉ် (၄၀)ခန့်က ဝန်းပတ်နေပြီး တစ်စင်းက ဝင်တိုက်ခဲ့ခြင်းဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
တရုတ်အစိုးရ၏ Xinhua သတင်းဌာနကမူ ဗီယက်နမ် ရေယာဉ်ကသာ မိမိတို့၏ သင်္ဘောတစ်စင်းကို နမော်နမဲ့ ဝင်တိုက်ခဲ့ခြင်းအဖြစ် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားနေဆဲ အခြေအနေတွင် အဆိုပါ ဒေသ၌ တရုတ်နိုင်ငံက ရေနံတူးမျှော်စင်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်အပေါ် ဗီယက်နမ်က ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနောက် ဗီယက်နမ်ရှိ တရုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖျက်ဆီးခံရပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အခါးသီးဆုံး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အင်္ဂါနေ့က ရေယာဉ်ချင်း တိုက်မိခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်သည် အဆိုပါ ရေနံမျှော်စင်နှင့် ရေမိုင်(၁၇)မိုင်မျှ အကွာတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဟု ဆိုသည်။
ဗီယက်နမ် မီဒီယာများက တရုတ်ရေတပ်သည် ရေနံမျှော်စင် အနီးတွင် မြန်နှုန်းမြင့် ဒုံးကျည်တင် တိုက်သင်္ဘော တစ်စင်းနှင့် မိုင်းရှင်းသင်္ဘော တစ်စင်းတို့ကို ဖြန့်ကျက် နေရာယူထားစေကြောင်း ဆိုသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းများအတွင်း တောင်တရုတ်ပင်လယ် အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗီယက်နမ်ကို အထက်စည်းမှ ချဉ်းကပ်မှုများ ပိုမို ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် အရှေ့ဘက် ကမ်းလွန်ဒေသများတွင် တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ဖိလစ်ပိုင် အစရှိသည့် နိုင်ငံများနှင့်လည်း ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။
တေလာဆွစ်ဖ်၏ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ဖျော်ဖြေပွဲ ဖျက်သိမ်း
နိုင်ငံရေး အခြေအနေများအရ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ဖျော်ဖြေပွဲကို ဖျက်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း တေလာဆွစ်ဖ်က အတည်ပြု ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် အတိုက်အခံ ဆန္ဒပြသူများနှင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်နေရာ ယင်းအခြေအနေအရ ဖျော်ဖြေပွဲကို ကျင်းပရန် မဖြစ်နိုင်တော့ဟု တေလာ၏ ကိုယ်စားလှယ်များက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းက Country ဂီတစတားအမေရိကန် အဆိုတော်မလေး၏ ဖျော်ဖြေပွဲကို ဇွန်လ(၉)ရက်နေ့၌ Impact အားကစားကွင်းကြီး၌ ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အခြေအနေများကြောင့် တေလာ၏ ဖျော်ဖြေပွဲ၌ လုံခြုံရေး အခြေအနေကို BEC-Tero Entertainment ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အာမခံချက် မပေးနိုင်တော့ချေ။
“ထိုင်းနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေအတွက် ရည်စူးပြီး ကျွန်မရဲ့ အချစ်တွေကို ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေပွဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ အတွက်တော့ ကျွန်မ အရမ်းပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်”ဟု တေလာက Twitterတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဖျော်ဖြေပွဲသည် လက်မှတ်အားလုံး ရောင်းကုန်သည်အထိ ကြိုတင်အားပေးမှုများ ရရှိထားကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ ပွဲစီစဉ်သူများက လက်မှတ်ကြိုတင် ဝယ်ယူထားသူများကို မေလ(၂၉)ရက်နေ့မှ ဇွန်လ (၃၀)ရက် အတောအတွင်း ငွေပြန်အမ်းသွားမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
ခရိုနီတစ်ဦး၊ လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးနှင့် ၈၈ ကျောင်းသားတို့ သုးံ ဦးကို
လူရိုင်းများ ဖမ်းမိသွားကြသည်။ ၄င်းတို့ကိုမသတ်ခင် ဆန္ဒတစ်ခုဆီကို
ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လူရိုင်းခေါင်းဆောင်က ကတိပြုသည်။ ခရိုနီက
ဘီယာအဝသောက်ချင်သည်ဟု ပြောရာ သောက်နိုင်သလောက် သောက်ခိုင်းပြီး
သတ်လိုက်သည်။ လွှတ်တော်အမတ်က မိန့်ခွန်းချွေချင်သည်ဟု ပြောသည်။ ဤတွင် ၈၈
“အဲဒီအမတ်မင်း မိန့်ခွန်း မပြောခင် ကျွန်တော့ကို သတ်ပါဗျာ”
နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် မြေကွက်နှင့်ကားချပေးရန် ကမ်းလှမ်း
နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် မြေကွက်နဲ့ မဲဆွဲစည်းရုံးသွားလာရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ရေး ကားပါမစ်တွေ ချပေးဖို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သမ္မတရုံးကို စာပေးပို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာပါတီတွေ ပါတီရုံးဖွင့်ဖို့နဲ့ သွားရေးလာရေး အခက်အခဲကူညီပေးဖို့ ပါတီတခုကို ကား ၅ စီးနှုန်း အခွန်လွတ်တင်သွင်းခွင့်ပေးဖို့နဲ့ နိုင်ငံပိုင် လစ်လပ်တဲ့နေရာမှာ သင့်တော်တဲ့ မြေကွက်နဲ့ အခန်းတွေကို ခွင့်ပြုပေးဖို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သမ္မတရုံးကို မေ ၂၂ ရက်စွဲနဲ့ တင်ပြထားတာပါ။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး ပါတီတွေကို မေ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကော်မရှင်က အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေကပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် တွေ့ဆုံရာမှာ ပါတီတွေက နေရာ၊ ရန်ပုံငွေအခက်အခဲ ရှိတာတွေကို တင်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံရေး ပါတီတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း အကောင်ထည်ဖော် လုပ်ဆောင်တာလို့ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (မြန်မာ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေက ပြောပါတယ်။
အစိုးရက ကားပါမစ်တွေပေးပြီး သင့်တော်တဲ့နေရာတွေ ချပေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်သလို လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲကို သူက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ပါတီက ရုံးမရှိဘူး၊ တော်တော်လေး အခက်အခဲရှိတယ်။ ၂၀၁၀ တုန်းကဆို ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ သုံးလေးကြိမ်လောက် နေရာပြောင်းရတယ်။ အိမ်ခန်းတွေဆို မငှားရဲဘူး၊ ငှားပြီးရင်လည်း ရွှေ့ရပြန်ပြီ။ အခုလက်ရှိနေရာလည်း သြဂုတ်လမှာ ပြောင်းရတော့ဆိုတော့ ငှားဖို့အိမ် လိုက်ရှာနေတယ်။ ရုံးအခက်အခဲရှိတယ်။ ကားရှိရင်လည်း ကောင်းတာပေါ့။ ကျနော်တို့မှာ ကားမရှိဘူး၊ အထောက်အပံ့လည်း မရှိဘူး။ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရ ကိုယ့်အချင်းချင်းတွေစိုက်ပြီး ပါတီဝင်တွေရဲ့ ရန်ပုံငွေနဲ့ လုပ်နေရတယ်။”
ညီနောင်တိုင်းရင်းသား ပါတီများ ဖက်ဒရေးရှင်းက ဦးစောသန်းမြင့်ကတော့ အစိုးရက ကားပါမစ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ မြေကွက် အခန်းတွေချပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ပါတီငယ်လေးတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ပါတီငယ်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအတွက်တော့ အားဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကျနော်တို့လို တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ငွေကြေးအင်အားမရှိဘူး။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေလို ပါတီကို တနည်းတလမ်းနဲ့ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။ ပါတီငယ်တွေ၊ ပါတီလတ်တွေကျတော့ အထောက်အပံ့တွေ ရကြတာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း အလေးထားဘူး ကူညီကြတာမဟုတ်ဘူး။ ခရိုနီတွေကလည်း အင်အားကြီးတဲ့ပါတီကိုသာ ကူညီကြတာ။ အင်အားအလယ်အလတ်နဲ့ အင်အားသေးတဲ့ ပါတီတွေကျတော့ နိုင်ငံတော်က တကယ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်၊ တကယ်တမ်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ပါတီငယ်တွေအားလုံး၊ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအားလုံးက ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တယ်။”
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးဝင်းထိန်ကတော့ ဒီလိုထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေ လုပ်ဆောင်တာကို အယုံအကြည်မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမှာ နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ ပါတီပေါင်း ၆၅ ပါတီရှိပါတယ်။ အရင်ကလည်း အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်း အစိုးရက ကားတင်သွင်းခွင့် ပါမစ်များ ချပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ခုတစ်ပတ်အတွင်း ပြည်တွင်း စီးပွားရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာရော၊ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ အင်န်ဂျီအို အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ အကြားမှာပါ ဂယက်ရိုက်သွားတဲ့ သတင်းတစ်ခုကတော့ ရန်ကုန်၊ ဗဟန်းရွှေတောင်ကြားထဲက ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း တစ်ယောက် ပိုင်တဲ့ခြံနဲ့ အဆောက်အအုံတွေကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့UNICEF က ရုံးခန်းအဖြစ် အသုံးပြုဖို့ တစ်လ ဒေါ်လာ ၈၇,၀၀၀၊ တစ်နှစ်ဒေါ်လာ တစ်သန်းကျော်နဲ့ ငှားရမ်းအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက စပြီးဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ အဲဒီသတင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်စားကြတာက ရန်ကုန်မှာ အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်းတွေ ဒီ လောက်တောင်တက်နေပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ် UNICEF က ငှားထားတဲ့နှုန်းကပဲ သဘာဝမကျစွာ များနေသလား၊ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်တွေ၊ ခြံတွေ ဘယ်လောက်များ ပိုင်နေကြသလဲ၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ရလာကြသလဲ၊ မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းတွေ ကျရောကျဦးမှာလားစတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ အဲဒီအကြောင်းတွေ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါ့မယ်။
အခု UNICEF က ငှားရမ်းထားတဲ့ခြံဟာ အမေရိကန်အစိုးရက နာမည်ပျက် စာရင်းသွင်းမထားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပိုင်တယ်လို့ UNICEF ဘက်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပေမယ့် ရန်ကုန်က ၀ါရင့်အကျိုးဆောင်တွေ အားလုံးကတော့ အဲဒီခြံဟာ အရင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ နအဖခေတ် လယ်ယာဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ညွန့်တင် ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ သိထားကြတာပါ။ သူတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရ ဗိုလ်ချုပ်ညွန့်တင်ဟာ ဒီခြံတစ်ခုတည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာ မဟုတ်ဘူး၊ အခြားတန်ဖိုးကြီး အိမ်ခြံမြေတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ညွန့်တင်ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက ရာထူးကနေ အရာကျသွားခဲ့ရသူပါ။ ဒီဘက်ခေတ်အထိ တန်ခိုးထွားခဲ့၊ တန်ခိုးထွားဆဲ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တောင် မဟုတ်သေးပါဘူး။ အဲလိုဆို အခြားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကရော ပိုင်ဆိုင်မှု ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ အလွန်များတယ်လို့ပဲ တစ်ခွန်းတည်း ဖြေရမှာပါ။
အဲဒီဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ရောင်းရင် ကျပ်ငွေ သိန်းပေါင်းသောင်းချီတန်တဲ့ အိမ်ခြံ မြေတွေ၊ ငှားရင် ခုလိုပဲ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ သန်းဂဏန်းလောက်ရနိုင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေ၊ စက်မှုဇုန်က မြေကွက်တွေတင်မက တိုက်ခန်းအမျိုးမျိုး၊ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အနှံ့က မြေကွက်ပေါင်း မြောက်မြားစွာလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့မှာ အလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ သုဝဏ္ဏ ဗိုလ်ချုပ်ရွာ၊ ရွှေတောင်ကြား ရွှေဝတ်မှုံအိမ်ရာ၊ ကမ္ဘာအေးဗီလာစတဲ့ နေရာတွေကတော့ ထင်ရှားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တွေ တရားဝင်ရထားတဲ့ အိမ်ရာတွေပါ။
၁၉၈၈ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းစဉ်တုန်းကတော့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ဘာမှသိပ်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ အဲဒီအိမ်ခြံမြေတွေကို နည်းလမ်းသုံးသွယ်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်လာတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပထမ တစ်နည်းကတော့ အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်းတွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မတရားနည်းနဲ့ အရယူတာပါ။ မြို့သစ်ဖော်တယ်၊ ယူတယ်၊ စက်မှုဇုန်ဖော်တယ်၊ ဝေစုယူတယ်၊ ကွန်ဒိုဆောက်တယ်၊ ဝေစုယူတယ်၊ ဈေးဆောက်တယ်၊ ဝေစုယူတယ်၊ ၀န်ကြီးဌာနပိုင်တွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဝယ်ယူတယ် စတဲ့နည်းနဲ့ မြေကွက်တွေ၊ တိုက်ခန်းတွေ၊ ဆိုင်ခန်းတွေ အများကြီးရကြပါတယ်။ မြေကွက်ရပြီးတော့လည်း လွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့လုပ်စားကိုင်စားနေတဲ့ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ယောက်ကို အိမ်ဆောက်ခိုင်းလိုက်ရုံပါပဲ။ အဲလိုနည်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ပေါင်းများစွာ ရလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ ရှေးဘုရင် ခေတ်ကလို မောင်လှယ်နှမလှယ်နည်းနဲ့ မြေကွက်တွေ၊ အဆောက်အအုံတွေရကြတာပါ။ တစ်နေရာမှာ စစ်တိုင်းမှူးလုပ်တဲ့ သူဟာ မြို့သစ်ဖော်ရင် သူ့ဘာသာသူ ယူရုံမက အခြားတိုင်းမှူးတွေကိုလည်း ဝေစုလှမ်းပေးပါတယ်။ စစ်ရုံးချုပ်က ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုလည်း ပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံး နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ စစ်သံမှူးလုပ်သူတွေကိုတောင် ခွဲဝေပေးပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အခြားတိုင်းမှူးတွေ၊ ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း သူ့ကို ပြန်ပေးကြလို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဦးချင်းစီဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားက မြို့တွေမှာ မြေကွက်ပိုင်၊ အိမ်ခြံပိုင်တွေ ဖြစ်နေကြတာပါ။ တချို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဆို သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုတောင် မမှတ်မိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်နည်းကတော့ အဂတိလိုက်စားမှုလုပ်လို့ ရလာတဲ့၊ လာဘ်စားလို့ရလာတဲ့ တရားမ၀င်ငွေတွေနဲ့ ၀ယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါ။ ကိုယ်ပိုင်ငွေရော၊ အာဏာကိုပါ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ရန်ကုန် ရွှေတောင်ကြားလို တကယ့်မြေဈေးခေါင်ခိုက်နေတဲ့ နေရာမျိုးက မြေကွက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့မြေကွက်ကိစ္စ၊ အိမ်ခြံမြေကိစ္စ ပြောရင် “အဘပိုင်” ဆိုတာ လက်ညှိုထိုးမလွတ်တာပါ။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး မြေပိုင်ရှင်ကြီးတွေဆိုတာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေပါ။ တကယ့် တန်ဖိုးကြီး မြေကွက်တွေအများစု သူတို့မိသားစု ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ လက်ထဲမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးကွက်စီးပွားရေး တကယ်လုပ်တော့မယ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို တကယ် ခွင့်ပြုတော့မယ်၊ တံခါးကိုတကယ် ဖွင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ အိမ်ခြံမြေဈေးတွေက တရိပ်ရိပ်တက်၊ ပြဿနာကြီး တစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အစိုးရအဖွဲ့ရော၊ နိုင်ငံတကာကလည်း သိကြပါတယ်။ ဒီအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ ချောချောမွေ့မွေ့ ၀င်ရောက်လာနိုင်ဖို့ မြေဈေးတွေ ကျဆင်းအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုပြီး အကြံတွေပေးကြပါတယ်။ လုပ်ဖို့ကလည်း လွယ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုခေါ် ရန်ကုန်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ မြေကွက်သစ်တွေ အမြောက်အမြားဖော် ထုတ်ရုံပါပဲ။ ထွက်လာတဲ့မြေကွက်ကို အစိုးရနဲ့ အဲဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ခွဲဝေယူရုံပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့ဟာ မြေဈေးတွေ ကျဆင်းစေမယ့် အဲလို စီမံကိန်းမျိုးတွေကို လက်ဖျားနဲ့တောင် သွားမတို့ရဲပါဘူး။ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီမြေဈေးတွေ ခေါင်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းအားလုံးနီးပါးရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် သိပ်မကြာခင် မြင်နိုင်တဲ့ အနာဂတ်ကာလအထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းဖို့ မရှိသေးပါကြောင်း၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်အသိုင်းအ၀ိုင်း မိသားစုဝင်တွေဟာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ညွန့်တင် မိသားစုဝင်တွေလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအပြောင်းအလဲ ဖော်ဆောင်နေမှုကနေ အကျိုးအမြတ် အလွန့်အလွန် ရရှိ ခံစားနေကြရဦးမယ်၊ ပိုပိုပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာ လာကြဦးမယ် ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
၁။ မိန်းမကိုယ်သန့်စင်တဲ့ဆေးရည် PH Care တို့ အမွှေးကျွတ်ဆေး Fem တို့ မိန်းမကိုယ်ထဲဝင်ရင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
၂။ Latt acid ဆိုတဲ့ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးပြီးရင်ဖြစ်လာတာများပါတယ် ဆရာ။ ဒီဆပ်ပြာမသုံးသင့်ဘူးထင်တယ်နော်။
၃။ အမျိုးသမီးတွေ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး တင်ပါဦးဆရာ။ ကျေးလတ်နေ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အဒီဘက်မှာ အားနည်းသလားလို့။
တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး လိုတာထက်မပိုသင့်ပါ။ အဆန်းတွေ မသုံးသင့်ပါ။ ဗဂျိုင်းနားမှာ အကျိုးရှိစေတဲ့ ပိုးတွေ ရှိနေတာ ကောင်းတယ်။ သန့်ရှင်းအောင် ဆေးတွေနဲ့လုပ်ရင် အကောင်းတွေရော သေစေပြီး မှိုပိုးဝင်လာစေတတ်တယ်။ ရိုးရိုးဆပ်ပြာနဲ့ ရေသန့်ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။ မွှေးတိုင်း မကောင်းပါ။ ဈေးကြီးတိုင်း မကောင်းပါ။ အတွင်းခံ (ကော်တွန်) သာသုံပါ။ ဖုံးကွယ်ထားအပ်တဲ့ အတွင်းနေရာတွေ ပူနွေး စိုထိုင်းနေတာ ကြာရင် မကောင်းပါ။ ရေဆေးပြီး ရေကိုခြောက်သွေ့စေပါ။ လေသလပ်တာ ဖြစ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးပါ။”
• ကိုယ်အလေးချိန် များနေရင် လျှော့ချပါ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်သူတိုင်း သတိထားသင့်သော ခွေးရူးရောဂါ
တိရစ္ဆာန်များမှ လူကို ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများ (Zoonoses) အများအပြားရှိသည့်အနက် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည် လူနှင့် အနေနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်သောကြောင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ( အထူးသဖြင့် ခွေးနှင့် ကြောင်) မှ ရောဂါ ကူးစက်ရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများသည်ကို တွေ့ရှိရပေသည်။
ခွေးနှင့် ကြောင်များကို နမ်းရှုပ်ခြင်း၊ လူနှင့်အတူ အိပ်စေခြင်းဖြင့် လူ၏ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ထဲသို့ အမွေးများ ဝင်ရောက်စေနိုင်သည်။ ခွေး၊ ကြောင်များထံမှ ရောဂါပိုးများ၊ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ ကူးစက်စေနိုင်သည်။ ခွေးထံမှ Streptococcus ခေါ် ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်ခြင်း ခံရသဖြင့် ကလေးများတွင် လည်ပင်းနာခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊ ဖြစ်တတ်ပေသည်။ ထိုရောဂါ ဖြစ်၍ ဆေးကုသမှု ခံယူနေစဉ် ကလေးကို ခွေး၊ ကြောင်များနှင့် ခွဲထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
လေပြွန်ရောင်ရောဂါ(Allergic bronchitis) ဖြစ်လျှင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ အားနည်းခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။
- ခွေး၊ ကြောင်များကို နမ်းရှုခြင်းအား တားမြစ်ပါ။
- တိရစ္ဆာန်တို့နှင့်အတူ အိပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- တိရစ္ဆာန်များကို ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်း လက်ကို သေချာစွာ ဆေးကြောပါ။
- အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို သန့်ရှင်း သပ်ရပ်အောင် Grooming ပြုလုပ်သည့်အခါ သင့်နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ကို အဝတ်စည်းထားပါ။
- အိမ်ထဲရှိ ခွေး၊ ကြောင်အမွေးများကို စနစ်တကျ ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားပါ။
- သန့်ရှင်းရေးကို အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပါ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အစာခွက်၊ ရေခွက် သီးသန့် ထားပေးရန် လိုသည်။ အချို့သောသူများသည် ကလေးငယ်ကို ခွေးနှင့် ဆော့ကစားစေခြင်း မျိုး ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ မသိ နားမလည်သေးသည့် ကလေးငယ်က ခွေးကို ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း၊ ဆွဲထားခြင်းကြောင့် ခွေးက ပြန်ကိုက်မိ၊ ကုတ်ခြစ်မိသောအခါ မိဘများ မျက်ကလဲဆန်ပျာ ဖြစ်ရတော့ သည်။ ခွေး၊ ကြောင်များက ကုတ်ခြင်း၊ ကိုက်ခြင်းခံရလျှင် တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်နှင့် သော်လည်းကောင်း၊ ဆရာဝန်နှင့် သော်လည်းကောင်း သေချာ စွာ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
အကိုက်ခံရသော အနာ၊ အကုတ်ခံရသော အနာများမှ တစ်ဆင့် ဘက်တီးရီးယားများနှင့် မေးခိုင်ပိုးတို့ ဝင်ရောက်နိုင်သဖြင့် ဆရာဝန်ထံ ချက်ချင်းသွားပြပါ။ ဆရာဝန်သည် အနာကျက်အောင် ပဋိဇီဝဆေးများ တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ပဋိဇီဝဆေးများ ထိုးပေးခြင်း၊ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးခြင်းများကို လိုအပ်သလို ကုသပေးပါလိမ့်မည်။
ထိုဘက်တီးရီးယားများထက် ခွေးရူးရောဂါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မဝင်ရောက်ရန် အလွန် အရးကြီးပေသည်။ ခွေးရူးရောဂါသည် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါဖြစ်ပြီး ရောဂါကူးစက်ခံရသော သွေးနွေးသတ္တဝါအားလုံးကို သေဆုံးစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ခွေးနှင့် ကြောင် များမှတစ်ဆင့် လူကို ကူးစက်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်စေသော ရောဂါဖြစ်သည်။
ခွေးတွင် ပုံစံ နှစ်မျိုး တွေ့ရသည်။ ခွေးရူးရောဂါကို အစပိုင်းတွင် မည်သူမျှ သတိမထားမိတတ်ပေ။ ပထမဆုံး ခွေး၏အမူအရာ ပြောင်းလဲလာမည်၊ သုန်မှုန်လာမည်၊ စိတ်တိုလာမည်၊ အမှောင် သို့မဟုတ် ချောင်ထဲ၌ ပုန်းအောင်းနေတတ်သည်။ အရေပြား ယားယံလာတတ်သည်။
အမူအရာ ပြောင်းလဲရာတွင် ဆူညံဖျတ်လတ်စွာ နေတတ်သော ခွေးဖြစ်ပါက တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်ထိုင်းမှိုင်းသွားမည်။ မူလက ငြိမ်သက်အေးဆေးသော ခွေး ဖြစ်ပါက ရန်လိုလာမည်။ ရန်လို တိုက်ခိုက်တတ်သောပုံစံ (Furious Form)တွင် ခွေးသည် အစာ လုံးဝ မစားနိုင်၊ လျှာ မလှုပ် ရှားနိုင်သောကြောင့် ရေလည်း မသောက်နိုင်ပေ။ သို့သော် ခွေးသည် အစာ မဟုတ်သည့် ကောက်ရိုး၊ ကျောက်ခဲ၊ သစ်သား၊ မီးသွေး၊ ကော်ဇော၊ အင်္ဂတေ စသည်တို့ကို ကိုက်လိမ့်မည်။ ကြိုးချည်မထားသော ခွေး ဖြစ်ပါက တစ်ဟုန်ထိုး ထွက်ပြေးပြီး လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ခွေး၊ ကြောင်၊ လူတို့ကို ကိုက်မည်။ မျက်လုံး ကြောင်နေပြီး မျက်စိသူငယ်အိမ် ကျယ်နေမည်။ ရောဂါ ပြင်းထန်လာပြီး အကြောဆွဲ၍ တက်ရာမှ သေဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ရသည်။
ကြောင်များမှာမူ Furious Form သည် ထင်ရှားသည်။ ရန်လို တိုက်ခိုက်မှု ပိုပြင်းထန်သည်။ ကြောင်တွင် ခွေးရူး ရောဂါဖြစ်လာပါက တခြားတိရစ္ဆာန်များနှင့် လူများကို တိုက်ခိုက်တတ်သည်။ လက်သည်း၊ ခြေသည်းများနှင့် လည်း ကုတ်ခြစ်တတ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာ မသိလိုက်ရဘဲ အချိန်တိုတိုအတွင်း သေဆုံးသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ခွေးရူးရောဂါဖြစ်နေသော ခွေး၊ ကြောင်တို့၏ သွားရည်ထဲတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များ ပါရှိသသည်။ ထို ခွေး၊ ကြောင်တို့က လူကို ကိုက်မိလျှင် အကိုက်ခံရသော အနာထဲသို့ သွားရည်ထဲမှ ဗိုင်းရပ်စ်များ ဝင်ခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ကုတ်ခြစ်ခံရသော အနာ နေရာကို သွားရည်များ ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း ရောဂါ ကူးစက်စေသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ရောက်သွားသော ဗိုင်းရပ်စ်သည် နဗ်ကြောများမှတစ်ဆင့် ဦးနှောက်တစ်သျှူးများနှင့် တံတွေးဂလင်းများဆီသို့ ဝင်ရောက်သွားသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဗိုင်းရပ်စ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ တစ်သျှူးတိုင်းသို့ ရောက်သွားသည်။ ကိုက်သော ခွေးသည် ခွေးရူးဖြစ်သည်ဟု သံသယရှိပါက သို့မဟုတ် ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး မထိုးထားပါက အကိုက်ခံရသော လူကို ၇၂ နာရီအတွင်း(သုံးရက်အတွင်း) ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးရန် လိုအပ်သည်။ ခွေးရူးရောဂါ ဖြစ်ပွားလျှင် ကုရာနတ္ထိ ဆေးမရှိသောကြောင့် ဤရောဂါကို ကာကွယ်တားဆီးရန်-
- သင့်ခွေးကို ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး မှန်မှန်ထိုးပါ။
- ခွေးကိုက်ခံရလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်း ပြသစစ်ဆေးပါ။
- ခွေးရူးရောဂါ ဖြစ်သည်ဟု သံသယရှိသော ခွေး၊ ကြောင်တို့ကို အကာအကွယ်မဲ့သော လက်များဖြင့် လုံးဝ မထိမကိုင်ပါနှင့်။
- ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာပါ။
မှတ်ချက်။ ဒေါက်တာခင်စန်းမော် ရေးသားသည့် တိရစ္ဆာန်များမှ လူကို ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများ စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
Written by အယ်ဒီတာတစ်ဦး
ပူအိုက်သော နေ့လယ်ခင်းအချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်မသည် အိုးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသရှိ ရွာလေးတစ်ရွာသို့ ဖြတ်သန်းသွားချိန်တွင် တမာပင် အရိပ်အောက်၌ ဖိနပ်မပါသော ကလေးအုပ်စုတစ်စု ကစားနေကြသည်။ ကလေးတွေ ကစားနေသည့် အလယ်တွင် ကျွဲကြီးတစ်ကောင် မတ်တတ်ရပ်နေသည်။ ထိုကလေးတွေက အသက်သုံးလေးနှစ်ခန့် အရွယ်ထက် မပိုပေ။ သူတို့က ကျွန်မကို ဝိုင်းလိုက်ပြီး ပြုံးပြနေကြသည်။
ထိုစဉ် ကလေးနှစ်ယောက်က ကျွန်မလက်ကို ဆွဲပြီး လမ်းကျဉ်းလေး တစ်ခုဆီသို့ ခေါ်သွားသည်။ လမ်းဆုံးတွင် သွပ်မိုးနှင့် ဘေးပတ်လည် ဟင်းလင်းဖွင့်ထားသော စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ကျောင်းပေါ်တွင် ဆရာမလေး တစ်ယောက်ကို အရွယ်အမျိုးမျိုးနှင့် ကလေးအယောက် ၆၀ လောက်က ဝိုင်းနေပြီး စာသင်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကျောင်းလေးသည် ဉာဏ်တော်အမြင့် ၆ မီတာခန့် ရှိမည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ တည်ထားသော တောင်ကုန်းလေး အောက်ခြေတွင် ရှိသည်။ စာသင်ကျောင်း၏ နံရံတစ်ဖက်သည် ဘုရားတည်ထားသည့် တောင်ကုန်းလေး ဖြစ်နေသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးများသည် ဗုဒ္ဓ၏ ခြေတော်ရင်းတွင် ခိုလှုံရင်း စာသင်ကြားနေကြသည့်အသွင် ပေါက်နေသည်။
ကျွန်မက အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို လေ့လာ သုံးသပ်နေစဉ် ဆရာမလေးက ကျွန်မကို မြင်သွားသည်။ သူက အင်္ဂလိပ်လို မပြော။ သို့သော် ကျွန်မကို လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် အတန်းရှေ့လာရန် ခေါ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် လက်ကိုဆွဲကာ ပြုံးပြလိုက်ပြီး “မင်္ဂလာပါ” ဟု နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ ကျွန်မက ကလေးတွေကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ချိန်တွင် သူတို့က ရှက်ကြောက်နေသော်လည်း ကျွန်မအနီးသို့ တိုးလာကြသည်။
အတန်းကို နှုတ်ဆက်လိုက်သည့် အခါတွင် အနည်းငယ် ရဲရင့်ပုံရသည့် ကျောင်းသားလေးများက ကျွန်မ နားမလည်သည့် စကားဖြင့် ကျွန်မကို အော်ပြောလိုက်ကြသည်။ မကြာမီ တစ်တန်းလုံးကလည်း ကျွန်မကို ဝိုင်းအော်ကြသည်။ နောက်မှ သူတို့က အင်္ဂလိပ်လို “ဖိနပ်” “ဖိနပ်” ဟု အော်နေမှန်း သိလိုက်ရသည်။ သူတို့က ကျွန်မကို ဖိနပ်ချွတ်ရန် အော်ပြောနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓကို ရိုသေရန် လက်ဟန်ဖြင့် ပြကြသည်။ ကျွန်မက ကြိုးသိုင်းဖိနပ်ကို ချွတ်လိုက်ပြီး နေလောင်နေသော ခြေဖဝါးများကို ပြလိုက်ချိန်၌ အတန်းထဲတွင် ရယ်သံတွေ ပေါ်ထွက်လာသည်။
မြန်မာတောကျောင်းလေးတွေအကြောင်း ကျွန်မ မေ့နိုင်တော့မည် မထင်။ ကျောင်းဝင်းများထဲက ထွက်ပေါ်လာသည့် အသံလေးများကိုလည်း ကြားယောင်နေမိသည်။ ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ ဝင်လာကြသည့် အဖြူအစိမ်း ကျောင်းဝတ်စုံ ဝတ်ထားသော ကျောင်းသားလေးများကိုလည်း မြင်ယောင်နေမိသည်။ ကျွန်မသည် မူလတန်းကျောင်းပေါင်း များစွာကို ရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်မကို ဖော်ရွေသော ဆရာမလေးတွေက အမြဲကြိုဆို ဖိတ်ခေါ်ကြသည်။ ကျွန်မလာတိုင်းလည်း သူတို့၏ ပြည့်ကျပ်နေသော အတန်းထဲမှ ထွက်လာပြီး စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာဖြင့် ကြိုဆိုကြသည်သာ ဖြစ်သည်။ သူတို့က ကျောင်းသားတွေနှင့် ကျွန်မကို မိတ်ဆက်ပေးမည်။ ပြီးတော့ သူတို့ မတောက်တခေါက် အင်္ဂလိပ် စကားလေးများဖြင့် ကျွန်မကို ပြောဆိုပြီး လေ့ကျင့်ကြသည်။
ကျွန်မ ရောက်ခဲ့သည့် မူလတန်းကျောင်းလေးတိုင်းသည် တောအရပ်ဒေသများတွင် ရှိသော ကျောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ အဆောင်အယောင် ပစ္စည်းများလည်း အတော်ရှားပါးကြသည်။ ကျောင်းအများစုသည် ခန်းမကြီး တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ဘေးဘက်တွေကလည်း ဟင်းလင်းဖွင့်ထားသည်က များသည်။ နံရံရှိလျှင်လည်း သစ်သားနံရံများသာ ဖြစ်ပြီး ပြတင်းပေါက်များမှာလည်း မှန်တံခါး မရှိသော ပြတင်းပေါက်များ ဖြစ်သည်။ စာသင်ခုံများမှာလည်း ပျဉ်ပြားတစ်ချပ်ကို အကြမ်းထည် ရိုက်ထားသည့် ခုံများသာ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် အခန်းကြီးတစ်ခန်းတွင် ထိုင်နေသလို ဖြစ်သော်လည်း ကျောက်သင်ပုန်းကြီးများကို အတန်းရှေ့တွင် ချိတ်ဆွဲထားခြင်းက အတန်း ခွဲခြားထားသလို ဖြစ်စေသည်။ ကျောက်သင်ပုန်းကြီးများပေါ်တွင် မြန်မာစာများ၊ အင်္ဂလိပ်ဂဏန်းများ ရေးသားထားသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။
ဆရာမလေး အများစုသည် အသက်အရွယ် ငယ်ကြသည်။ သင်ကြားရ အလွန်ခက်ခဲသော အနေအထားများကို ရင်ဆိုင်ပြီး သင်ကြားပေးနေကြသူများ ဖြစ်သည်။ ကျွန်မကို ရွာငယ်လေး တစ်ရွာရှိ ကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့ ခေါ်ဆောင်လာသော မိတ်ဆွေက ဆရာမလေးများသည် ဝေးလံခေါင်ဖျားသော ဒေသများသို့ သွားရောက် တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြရသည်မှာ စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုသာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။ “သူတို့ တောကို ရောက်လာ၊ နောက်ဆုံးတော့ တောကလူတွေနဲ့ပဲ တွေ့ပြီး ညားကုန်ကြတော့တာပဲ” ဟု သူကဆိုသည်။ သူက ဆက်ပြီး “ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်လို့ မရဘူး။ အားလုံးဟာ သာသနာပြု ခေတ်ကလို ဖြစ်နေတော့တာပဲ” ဟု သူကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝေးလံခေါင်ဖျားကျသည့် ဒေသများသို့ တစ်ချိန်က သာသနာပြုအဖွဲ့တွေ ရောက်လာပြီး ကျောင်းတွေ ဖွင့်ကာ စာသင်ပေးခဲ့ကြဖူးသည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင်မှ ကက်သလစ်ကျောင်းများကို အစိုးရတပ်က ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီး ဥရောပ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် သီလရှင်များကို ထိုအရပ်ဒေသများမှ နှင်ထုတ်လိုက်ကြသည်။
ကျွန်မသူငယ်ချင်း ပြောပြချက်အရ ထိုစဉ်က စစ်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းအားလုံးကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းလိုက်သည်။ နိုင်ငံခြားမှ သာသနာပြုရန် ရောက်ရှိနေကြပြီး ကျောင်းများဖွင့်ကာ စာသင်ပေးနေကြသည့် ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ ဗြိတိန်၊ အီတလီ၊ အမေရိကန်တို့ကို တိုင်းပြည်အတွင်းမှ ထွက်သွားရန် နှင်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုစဉ်က သာသနာပြုအဖွဲ့က ကျောင်းများထောင်ကာ စာသင်ပေးနေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ သာသနာပြု အဖွဲ့များသည် လူမျိုးစုများအတွင်း ချဉ်းကပ်ပြီး ကျောင်းများဖွင့်ကာ ခရစ်ယာန် ဘာသာသို့ သွတ်သွင်းမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးက “ပြည်သူပိုင်တဲ့ကွာ၊ တော်တော်လေးကို မဆီလျော်တဲ့ စကားလုံးပဲ။ ဘယ်သူမှလည်း လျော်ကြေးမရဘူး။ အားလုံးကို အစိုးရက သိမ်းလိုက်တော့တာ” ဟု ပြောပြဖူးသည်။
ကျောင်းများကို ရုတ်တရက် ပြည်သူပိုင် သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ခန့် ကြာချိန်တွင် မြန်မာ့ပညာရေးသည် ဝမ်းနည်း စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် နိမ့်ကျသွားခဲ့သည်။ ထိုပျက်စီးနေသော စနစ်နှင့်ပင် ယနေ့တိုင် ဆက်ပြီး သင်ကြားနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် သမိုင်းနှင့်ချီပြီး စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း မြင့်မားခဲ့သည့် တိုင်းပြည်တစ်ပြည် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၆၂ ခုနှစ်က စတင်ပြီး ပညာရေးတွင် နိုင်ငံရေးက ဝင်ရောက်ပြီး ချုပ်ကိုင်လိုက်သောကြောင့် ကျဆင်းသွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ အနေအထားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်ကျောင်းပေါင်း ၃၀ ကျော် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ထိုတက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များကို အစိုးရသည် ဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင်လည်း ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြသောကြောင့် ကျောင်းတွေ ထပ်ပိတ်ရပြန်သည်။ နောက်၂ နှစ်လောက်ကြာမှ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်မည်ဟု ပြောသော်လည်း ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ဖြစ်သည်။ အစိုးရ ကျောင်းပိတ်ရာတွင် မူလတန်းနှင့် အထက်တန်းများပါ မကျန်ခဲ့ပေ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် နွေရာသီ ပိတ်ရက်နှင့်ရောပြီး နောက်ထပ် ငါးလခန့် ကြာသည်အထိ မဖွင့်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းသည် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုအသွင်ဖြင့် ဖော်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့် အောင်မြင်သင့်သလောက် အောင်မြင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုရမည်။ သို့သော် အစိုးရသည် ကြွေးမြီပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်အကျဆုံး တိုင်းပြည်တစ်ပြည် အဖြစ် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ခံယူလိုက်သည်။ စာတတ်မြောက်သူ ဦးရေသည် ချက်ချင်း ၁၈ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားပြီး ၇၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးစနစ်သည် စတုတ္ထတန်း အဆင့်အထိ မသင်မနေရ ပညာရေးစနစ် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကုလသမဂ္ဂ၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးသည် ကျောင်းမတက်နိုင်ကြသေးပေ။ မြန်မာကလေး သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သာ မူလတန်းပညာကို သင်ယူတတ်မြောက်ကြသဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်နှင့် ယှဉ်လျှင် အလွန်နိမ့်ကျသည်ဟု ဆိုရမည်။ မိဘအများစုသည် မိမိတို့ သားသမီးများကို ကျောင်းပို့ရန်အတွက် စရိတ်မတတ်နိုင်ကြပေ။ စရိတ်ဆိုသည်မှာ ကျောင်းဝတ်စုံ၊ စာအုပ်၊ ခဲတံဖိုးများသာမက စာသင်ခုံဖိုး၊ ကုလားထိုင်ဖိုးများ အပြင် ဆရာတို့အတွက် လစာကိုပင် ထောက်ပံ့ ပေးနေကြရသည့် အနေအထားတွင် ရှိနေသေးသည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် အစိုးရက ပညာရေး အသုံးစရိတ်ကို လျှော့ချလိုက်ပြန်သည်။ သို့သော် စစ်ရေးအတွက် အသုံးစရိတ်များကား မြင့်တက်သွားသည်။
ရလဒ်မှာ နိုင်ငံတော်က ဆရာတွေကို လစာလည်း တိုးမပေးနိုင်သည့် အပြင် ကျောင်းအဆောက်အအုံများ ကောင်းအောင်လည်း မလုပ်နိုင်၊ ဆရာတွေလည်း တိုးမခန့်နိုင်၊ ကျောင်းအုပ်တွေလည်း တိုးမခန့်နိုင်နှင့် ပညာရေးဘဝ နိမ့်ကျခဲ့ရသည်။ ကျွန်မနှင့် သိသော မြို့ကြီးတစ်မြို့မှ အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် မူလတန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး တစ်ဦးက လုပ်သက်နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ် ကျော်လာပြီ ဖြစ်သော်လည်း လစာ မလုံလောက်သဖြင့် သူ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အလုပ်ထွက်ခိုင်းနေကြောင်း ပြောပြသည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ကျူရှင်သင်သောကြောင့် သူမ၏ လစာထက် ဆယ်ဆ ပိုပြီး ဝင်ငွေကောင်းသည်။
သူတို့ ဇနီးမောင်နှံသည် လစာဝင်ငွေ နည်းပါးသောကြောင့် တဲသာသာ အိမ်လေးတွင် သားတစ်ယောက်နှင့်အတူ နေထိုင်ကြရရှာသည်။ တစ်ညတွင် သူတို့ဇနီးမောင်နှံက အိမ်သို့ ထမင်းစား ဖိတ်ခေါ်သည်။ သူတို့ အိမ်ကလေးက ဝါးတဲလေးသာ ဖြစ်ပြီး မီးလုံး တစ်လုံးသာ တစ်အိမ်လုံးတွင် ထွန်းနိုင်သည်။ ကျွန်မကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူ စာရေးသည့် စားပွဲခုံအကြမ်း၊ ဝါးတန်းထိုင်ခုံတို့တွင် ထိုင်ခိုင်းပြီး ထမင်းပြင်ကျွေးသည်။ ထိုစားပွဲခုံ အစုတ်သည် သူတို့အိမ်တွင် ရှိသည့် တစ်လုံးတည်းသော ခုံလည်းဖြစ်သည်။ သူက ကျွန်မနှင့် တစ်တန်းတည်း ခုံတန်းအစွန်တွင် ထိုင်လိုက်သည်။ မီးသီးရောင် မှိန်ပျပျအောက်တွင် ကျွန်မတို့ ထမင်းစားနေသည်ကို ဆရာမက ထိုင်ကြည့်နေသည်။ ယခု ကျွန်မကို ပြင်ကျွေးလိုက်သည့် ညစာသည် သူတို့ တစ်လစာလောက် ပြောင်သွားမည် ထင်သည်။ အိမ်တွင် အိမ်ရှင်မ ဖြစ်သူသည် ခင်ပွန်းသည်နှင့် ဧည့်သည်တို့ နောက်မှ စားကြရသည့် ဓလေ့ရှိမှန်း သိသော်လည်း ကျွန်မက သူ့ကို ကျွန်မတို့နှင့် အတူတူလာစားရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။ သို့သော် သူက ငြင်းလိုက်သည်။
“ကျွန်မတို့က ရှင့်ကို အိမ်ခေါ်ပြီး ဂုဏ်ပြုတာပါ။ ရှင်ပဲစားပါ” ဟု သူမက ပြောသည်။ ကျွန်မက ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကို အတော်လေးစားသွားမိသည်။ ပြီးတော့ ယဉ်ကျေးစွာဖြင့် ထမင်းဖိတ်ကျွေးနေသောကြောင့်လည်း ကျေးဇူးတင်နေမိသည်။
သူမ ခင်ပွန်း ကျူရှင်ဆရာကို ကျွန်မက ကွန်ပျူတာ သုံးသလားဟု မေးသည်။ သူကတော့ မြင်တောင် မမြင်ဖူးကြောင်း ပြောသည်။ သို့သော် သူတို့ကျောင်းသားတွေ တစ်နေ့တော့ ကွန်ပျူတာ သုံးကြလိမ့်မည်ဟု သူက ပြောသည်။ သူက အင်တာနက်တွေ၊ အီးမေးလ်တွေလည်း မသိ။ သူသည် ဤမြို့တွင် ပညာတတ် လူလတ်ပိုင်းအရွယ် ကျောင်းဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သော်လည်း သူ့တွင် ကွန်ပျူတာ၊ အီးမေးလ်၊ အင်တာနက်များ အသုံးပြုရန် ဘယ်တော့မှ အခွင့်အရေး ရမည်လည်း မထင်ပေ။ အစစအရာရာ အစိုးရကသာ ထိန်းချုပ်နေသည့် တိုင်းပြည်တွင် ဖုန်းခေါ်ခြင်းအစ ဖက်စ်ပို့သည့်အဆုံး အစိုးရကသာ တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်နေသဖြင့် အနာဂတ်တွင် သူတို့ အီးမေးလ်ကိုပင် လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုရန် အခွင့်အလမ်း နည်းလှသည်။ (၁၉၈၀ ဝန်းကျင်က ဖြစ်ပါသည်။)
“ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်သွယ်ဖို့ ဆိုတာ ဒီတစ်နည်းပဲ ရှိတယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ အီးမေးလ်ဆိုတာ အရမ်းအံ့သြဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားပြောတဲ့ အီးမေးလ် ဆိုတာကြီးထက် မနက်ဖြန် ကျွန်တော့်အတန်းကို လာပြီး ကျွန်တော့် ကျောင်းသားတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်လာပြီး စကားပြောကြည့်တာ ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်” ဟု သူက ပြောလိုက်သည်။
Ref: Whispers at the Pagoda; Portraits of Modern Burma, Julie Sell
ဘရာဇီလ်းနိုင်ငံမှာ ဇွန်လအတွင်း ကျင်းပမယ့် ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့် ပြည်သူတွေက ရီယိုဒီဂျေနေးယိုမြို့တော်မှာ ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။
brazilကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် ဘရာဇီးအသင်း တောင်ပေါ် က လေ့ကျင်ကွင်းကို သွားရောက်ဖို့ ကစားသမားတွေ တင်လာတဲ့ကားကို ဆန္ဒပြ ဆရာမတွေက ၀န်းရံခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ကြွေးကြော် သံတွေ အော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရီယိုဒီဂျေနေးယိုမှာ ကျောင်းဆရာနဲ့ ဆရာမတွေက မေ ၁၂ ရက်နေ့ ကတည်းက ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး အလုပ်လစာ ကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ ကောင်းဖို့အတွက် တောင်းဆိုခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်နှစ်ကလည်း သန်းနဲ့ချီတဲ့ ဘရာဇီးလ်ပြည်သူတွေက ညံ့ဖျင်းတဲ့ လူထု ၀န်ဆောင်မှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့် လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ဘရာဇီးလ်ရဲ့ ဂန္တ၀င် ကစားသမားနဲ့ ဖီဖာ ကမ္ဘာဖလား သံတမန် ရော်နယ်ဒိုကလည်း ပြိုင်ပွဲအတွက် အခြေခံအဆောက်အဦတွေ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရရဲ့ နှောင့်နှေးနေမှုကို ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။
အရင်ရက်ပိုင်းကလည်း ဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ထိခိုက်မှာကို စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်း ဘရာဇီးလ် ဂန္တ၀င်ကစားသမား ပီလီက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဇွန် ၁၂ ရက်နေ့ အဖွင့်ပွဲစဉ် အဖြစ် ဘရာဇီလ်းဟာ ခရိုအေးရှားအသင်းနဲ့ ဆာပေါ်လိုမှာ ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားမ၀င် ဆင်စွယ်ရောင်းဝယ်တဲ့ ဥပဒေမဲ့ ဆင်ဖမ်းသမားတွေကြောင့် မနှစ်တုန်းက မြန်မာ့ဆင်ရိုင်း အနည်းဆုံး ၃၄ ကောင်လောက် ပျောက်ဆုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကို ကိုးကားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် သည်နေးရှင်းသတင်းစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
မနှစ်တုန်းက ဆင်တွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အမှု ၃၄ မှုမှာ ဆင်သတ်သမားတွေကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပေမယ့် ဒီထက်မက သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ယူဆကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဒုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်မောင်က သတင်းမှာ ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့တောတောင်ထဲမှာ ဆင်ရိုင်းတွေက ကောင်ရေ ၂၅၀၀ မှ ၃ ထောင်လောက်အထိ ရှိနေတာပါ။
ဒီအရေအတွက်ဟာ ၁၉၆၀-၁၉၇ လောက်က ကောင်ရေ ၆ ထောင်လောက်ကနေ ၁၉၉၁ မှာ ကောက်ယူတဲ့စာရင်းအရ ၄၆၃၉ ကောင်ကနေ ထပ်ပြီးလျော့နည်းသွားတာလို့ အစိုးရခန့်မှန်းစာရင်းတွေကို ကိုးကားပြီး ဒုဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ခုလို ဆင်ရိုင်းကောင်ရေ လျော့နည်းသွားရတာဟာ ဆင်စွယ်ကြောင့် အသတ်ခံရတာရော၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် သက်ရှိဆင် အကောင်လိုက် ခိုးသွင်းတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ တရားမ၀င် ဆင်စွယ်တွေကို ပြည်ပပို့ ဈေးကွက်ရော ပြည်ကွင်းဈေးကွက်တွေကိုပါ နှိမ်နင်းဖို့ လိုနေပြီး ဆင်ရိုင်းကောင်ရေက အနှစ် ၂၀ အတွင်း အကောင် ၂ ထောင်ကျော် လျော့နည်းသွားတာလို့ ထင်ရှားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင် ဦးသိန်းအောင်က ပြောပါတယ်။